စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှု - အများစုရဲ့ပြproblemနာလား၊ လူနည်းစုလား။ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
Eval ကျန်းမာရေးပါမောက္ခ 2011 ခုနှစ်မတ်လ; 34 (1): 3-56 ။ Doi: 10.1177 / 0163278710380124 ။ Epub 2010 စက်တင်ဘာ 27 ။
Sussman S က1, Lisha N ကို, Griffiths က M ကို.
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းသုတေသနပြုမှုများတိုးပွားလာသောအရာသည်များစွာသောအရာဝတ္ထုနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်အလားတူလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်ရှိဆောင်းပါးသည်စာပေကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခု (ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်၊ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အစာ၊ လောင်းကစား၊ အင်တာနက်၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ။ လေ့လာမှု ၈၃ ခု (လေ့လာမှုတစ်ခုစီမှအနည်းဆုံးဘာသာရပ် ၅၀၀) မှအချက်အလက်များအားအသေးစားအချက်အလက်များဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်ယူဆချက်များပေါ်မူတည်ပြီးအမေရိကန်လူကြီးများအကြား ၁၂ လတာစွဲစွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၁၅% မှ ၆၁% အထိရှိသည်။ စာရေးသူများကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၂ လတာကာလအတွင်းစွဲလမ်းစေသောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနေရပြီး၊ စွဲလမ်းမှုကိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြproblemsနာများကြောင့်သာမကစဉ်းစားရန်လည်းအသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုယူဆရန်မှာအများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဟုပြောကြားသည်။ လူတစ် ဦး အဆင့်အချက်များ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းသုတေသနပြုမှုများတိုးပွားလာသောအရာသည်များစွာသောအရာဝတ္ထုနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်အလားတူလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လက်ရှိဆောင်းပါးသည်စာပေကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခု (ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်၊ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အစာ၊ လောင်းကစား၊ အင်တာနက်၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ။ 11 လေ့လာမှုများ (လေ့လာမှုတစ်ခုချင်းစီ) မှဒေတာ n = အနည်းဆုံးဘာသာရပ် 500 ကို) တင်ပြနှင့်အသေးစားဒေတာနှင့်အတူဖြည့်စွက်ခဲ့ကြသည်။ မည်သည့်ယူဆချက်များပေါ်မူတည်ပြီးအမေရိကန်လူကြီးများအကြား ၁၂ လတာစွဲစွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၁၅% မှ ၆၁% အထိရှိသည်။ စာရေးသူများကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၁၂ လတာကာလအတွင်းစွဲလမ်းစေသောရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားနေရသည်ဟုယူဆရပြီး၎င်းသည်ဘဝပုံစံပြthatနာများအပြင်ဘဝပုံစံပြproblemsနာများကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစိတ် ၀ င်စားရန်အသုံးဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ လူတစ် ဦး အဆင့်အချက်များ။
keywords: စွဲ, ပျံ့နှံ့, ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု, comorbidity, အပြုအမူစွဲ
မကြာခဏယခင်ကဇီဝကမ္မသည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းရေးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော်လည်း, "စွဲ" ဟူသောဝေါဟာရကိုပိုမိုကျယ်ပြန်အဓိပ္ပာယ်အောင်မြင်ပါပြီ (ဥပမာ, ကြည့်ပါ www.dsm5.org; ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2010 တွင်ဝင်ရောက်; ဒါ့အပြင် ဘရူ & Potenza, 2008; Griffiths က, 2005a; Marks, 1990; Orford, 2001; Schneider & သံ, 2001) ။ သုတေသီများနှင့်ဆရာဝန်များအကြား“ စွဲလမ်းမှု” သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အလိုအလျှောက်သို့မဟုတ်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအစပြုပေးသောအပြုအမူနှင့်အပြင်းအထန်အလုပ်များနေသောရောဂါတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် mesolimbic dopaminergic system အတွင်းပစ်ခတ်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် ; စိတ် ၀ င်စားခြင်း၊ဘရူ & Potenza, 2008; Johansson, Grant, ကင်မ်, Odlaug, & Gotestam, 2009; Schneider & သံ, 2001; Volkow & ပညာရှိ, 2005) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး (ဥပမာ၊ မူးယစ်ခြင်း (သို့) ရေရှည်တည်တံ့သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ) နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော်အမြဲတစေထပ်ခါတလဲလဲ၊ အပြုအမူကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့တွင်အချိန်များစွာပါဝင်သည်။ဘရူ & Potenza, 2008; Marks, 1990).
စွဲလမ်းမှုရောဂါသည်အပြုအမူအားရပ်တန့်ခြင်း (သို့) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း (လွတ်လပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း) ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ရန်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများကိုတွေ့ကြုံခံစားစေသည်။Schneider & သံ, 2001) ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ထိုသူသည်အပြုအမူမည်သည့်အချိန်၊ မည်မျှကြာမည်၊ ရပ်မည်၊ မည်သည့်အပြုအမူများသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသေချာစွာမခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းဖြစ်လာသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်သို့မဟုတ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါကယခင်ကကဲ့သို့ပျော်စရာအဖြစ်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ပါ။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများတွင်ဘဝအခန်းကဏ္ performance (ဥပမာ၊ အလုပ်၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ဝါသနာများ) ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအားနည်းခြင်း၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာပြproblemsနာများ၊ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းမရှိသောစွဲလမ်းမှုသည်သိသာထင်ရှားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှု (ပုံ - ဇီဝဗေဒအခြေခံသောသည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အမူအကျင့်တွင်ပိုမိုပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်များရုတ်တရက်ရပ်စဲခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်း၊ အကူအညီမဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်တိုခြင်းစသည့်လက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ ကြည့်ပါ) Allegre, Souville, Therme, & Griffiths က, 2006; Hausenblas & Down, 2002လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုနှင့်ပတ်သက်။ ) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူသည်စွဲလမ်းသူအားဤအပျက်သဘောလက္ခဏာများကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်ဟုထင်ရကောင်းထင်လိမ့်မည် (Sussman & Unger, 2004) ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုအဆင့်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးမှထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည်မြင့်မားနေပုံရသည် (ဥပမာ ၁ နှစ်တာကာလအတွင်း ၇၀% ကျော်၊ Brandon, Vidrine, & Litvin, 2007; Hodgins & e-Guebaly, 2004; Miller က, ဝေါလ်တာ, & Bennett က, 2001; Schneider & သံ, 2001) ။ ဤအကျိုးဆက်များဖြစ်နိုင်ခြေကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သောအပြုအမူ ၁၁ ခုအတွက်ပုံဖော်ထားသည် စားပွဲတင် 1 လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ အင်တာနက်၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အလုပ်နှင့်ဈေးဝယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Schaef (၁၉၈၇) ကွဲပြားခြားနားအမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုခွဲခြားဖို့ typology အဆိုပြုထား။ ပထမအမျိုးအစား ပစ္စည်းစွဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်သောထုတ်ကုန်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအပါအ ၀ င်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းပါဝင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမကြာခဏစီးကရက်သောက်ခြင်း၊ အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းစသည့်အမျိုးအစားများအဖြစ်ခွဲထားသည်။Sussman & Ames, 2008) ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း (နှင့်အခြားနီကိုတင်းပါဝင်သောဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ) သည်တရား ၀ င်သော်လည်းအလွန်အမင်းစွဲလမ်းစေပြီးရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်အချိန်မတန်မီသေစေနိုင်သောအပြုအမူဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းဖြစ်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင်တရား ၀ င်အရက်သောက်ခြင်းသည်အလွန်စွဲလမ်းတတ်ပြီးအချိန်မတန်မီသေဆုံးခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးအများစုသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုတွင်သိသိသာသာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစာစားခြင်းရောဂါများတွင် anorexia nervosa, bulimia, အလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့်မူးရူးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းရောဂါ (BED) သည်၎င်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွင်ရှိသောအခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းယင်းတို့အနက်မှမည်သည့်အပြုအမူကိုမဆိုစွဲလမ်းစေသောပုံစံကိုပြရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။Faber, Christenson, De Zwaan, & Mitchell, 1995; Goossens, Soenens, & Braet, 2009; Lewinsohn, Seeley, Moerk, & Striegel-Moore, 2002). ဂျိမ်း၊ ဂူနှင့်လျူ (၂၀၀၁) မူးယစ်ဆေးဝါးစားခြင်းနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုအခြားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းများကိုအကြံပြုသောပေါင်းစည်းနေသည့် neuroimaging, သိမြင်မှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအရဆေးစွဲမှု၏သီအိုရီပုံစံအရသင့်လျော်စွာကိုက်ညီသည်။ Volkow and Wise (၂၀၀၅) အလားတူရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဒုတိယအမျိုးအစား ဖြစ်စဉ်ကိုစွဲတစ် ဦး ချင်းစီကိုစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲစေသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုသူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေပြီးမှီခိုလာရခြင်းအားဖြင့်အလားအလာရှိသောရောဂါဗေဒအပြုအမူများပါ ၀ င်သည်။ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2000; Schaef, 1987) ။ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊Griffiths က, 2005a; Orford, 2001) ။ ဥပမာ, လူငယ်တို့ (1999) အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုခံစားနေရသူများသည်သူတို့၏စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးချဖွယ်ရှိသည် (ဥပမာ၊ အထီးကျန်၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှု) သည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်စေပြီးသည်းခံခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုအစီရင်ခံခြင်းမအောင်မြင်ပါ အသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်ဖြတ်တောက်ရန်နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြောင့်သူတို့၏ဘဝများ၌အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်။
နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်စွဲစွဲဥပမာလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အလွန်အကျွံပါ ၀ င်သည့်အခါအချို့လူများအတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်အလွန်အမင်းအကွာအဝေးများနှင့်အချိန်ကာလများအတွက်ပြေးထွက်ခြင်း) ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်၊ ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းမလေ့ကျင့်ပါကစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။Griffiths က, 1997; Thaxton၊ ၁၉၈၂) ။ တတိယဥပမာကတော့အသုံးစရိတ်များတဲ့။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်ဘဏ္consequencesာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများရှိသော်ငြားအပေးအယူလုပ်သောသုံးစွဲသူများသည်အကြွေးကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံရသည်Hodgson, Budd, & Griffiths က, 2001) ။ ၎င်းတို့သည်စီမံချက်နှင့်ဝယ်ယူသည့်အပြုအမူပုံစံများကိုပထမအမြင်အာရုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ပိုမိုနီးကပ်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အရာ ၀ တ္ထုတစ်မျိုးမျိုးကိုထပ်ခါတလဲလဲ ၀ ယ်ခြင်းပုံစံသည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားမှုရရှိရန်အတွက်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။အနက်ရောင်, 2007) ။ သူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများအတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ငွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားတတ်ကြသည်။Hanley & Wilhelm, 1992).
အချို့သောစွဲလမ်းမှုများသည်မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းလူမှုရေးအရလက်ခံမှုကိုရရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, workaholism ပထမ ဦး ဆုံးအပျော်အပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ထို့နောက်လူတစ် ဦး ၏လူမှုရေးဘဝကန့်သတ်, ပုဂ္ဂလဒိive္စိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှု (ဥပမာ, "မီးလောင်ရာ" ၏ခံစားချက်) ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအရေးယူမှုကို ဦး တည်သွားစေခြင်းငှါ (ဥပမာ, အလုပ်ကိစ္စများနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေစဉ်ကားမောင်း, ကားမောင်း နှင့်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးနေစဉ်ကားမောင်းခြင်း) ။ သို့သော်“ workaholics” သည်အလုပ်အကိုင်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လစာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ချီးမွမ်းခြင်းများကဲ့သို့သော ဆက်လက်၍ လူမှုရေးနှင့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ရရှိနိုင်သည်။Griffiths က, 2005b).
စွဲစွဲလမ်းမှု ၁၁ မှုကိုစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပါပြီ။ ရွေးချယ်ထားသောစွဲလမ်းမှုသည်စီးကရက် (နီကိုတင်း) မှီခိုမှု၊ အရက်အလွဲသုံးစားမှု၊ မှီခိုမှု၊ တရားမ ၀ င် / အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုမှု၊ အစားအစာမမှန်မှု / စွဲ (BED ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော် BED နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းလေ့လာလျှင် anorexia nervosa နှင့် bulimia တို့ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှု (ဆိုလိုသည်မှာရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း)၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲလမ်းမှု၊ လိင်စွဲလမ်းမှု၊ လေ့ကျင့်ခန်းစွဲလမ်းမှု၊ ဤစွဲလမ်းမှုများကိုယခင်အလုပ်တွင်စစ်ဆေးခြင်းကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည် (ဥပမာ၊ အဒမ်, 2009; ကွတ်, 1987; Essau၊ ၂၀၀၈; Freimuth et al ။ , 2008; Griffiths က, 2005b; လာကင်၊ ဝုဒ်၊ ဂရစ်ဖစ်၊ ၂၀၀၆; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀; Sussman & Black က, 2008) နှင့်မီဒီယာအတွက်လူကြိုက်များဖော်ပြထားခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပြုအမူတစ်ခုစီသည်ဂူးဂဲလ်ကိုရှာဖွေရန်လိုလျှင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Workaholism” သည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာ ၁၁၃,၀၀၀ နှင့်“ စျေး ၀ ယ်ခြင်းစွဲလမ်းမှု” သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ၁၁၀,၀၀၀ ကိုထုတ်လုပ်သည်၊ မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်နှစ်မျိုးကိုစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်စွဲလမ်းခဲ့သည် - စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်တွဲဖက်စွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများ (ဆိုလိုသည်မှာပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု / ဆက်စပ်မှုများ) ။ လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်မှာစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ (၁၁) ခု၏ပျံ့နှံ့မှုကိုခန့်မှန်းရန်နှင့် ၁၂ လတာကာလအတွင်းယေဘုယျအမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေတွင်ဤစွဲလမ်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကကိုအတူတကွဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်ဘွဲ့ကြိုကောလိပ်ကျောင်းသား ၆၀၄ ယောက်ရဲ့နမူနာမှာ၊ ကွတ် (1987) ငါတို့လေ့လာခဲ့သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ (၁၁) ခုအနက်မှ ၁၀ ခုကို (စီးကရက်၊ အရက်၊ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အဝလွန်ခြင်း၊ anorexia, bulimia, လောင်းကစား၊ ဆက်ဆံရေး၊ လိင်၊ သူသည်အင်တာနက်စွဲခြင်းကိုမလေ့လာခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာလေ့လာမှုပြီးဆုံးသည့်နှစ် (ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းအင်တာနက်သည်ထိုအချိန်ကမရှိခဲ့ပါ) ။ သူသည်နမူနာ၏ ၂၃.၈% ၏လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအားလုံး၊ လက်တွဲဖော်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်မသက်မှုများနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများမြင့်တက်နေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်စာရင်းအင်းကိုတင်ပြသည့်အခါသူလေ့လာခဲ့သောပြproblemနာအမျိုးအစားသုံးမျိုး (ဥပမာ - စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ၊ မိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုများ) ကိုခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။
သူသည်သူ၏ဆောင်းပါးပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုသာဖော်ပြသောစွဲသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုတွက်ချက်သည်။ ဤသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 11% ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ (သူ၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိကြ၏ Carnes, Murray, & Charpentier, 2004, သူကိုတွေ့ရှိခဲ့ 13 အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စွဲလမ်း၏နမူနာ၏ 1,604% ထက်နည်းတစ်ခုတည်းကသာခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ဒေတာများအရမူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ၅၈% သည်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောစွဲလမ်းမှု ၂ ခုမှ ၄ ခုနှင့် ၃၁% တွင်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောစွဲလမ်းမှု ၅ ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောသတင်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့်ကွတ်၏လေ့လာမှုတွင်ကောလိပ်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လွန်များ၏လေးပုံသုံးပုံခန့်သည်စွဲလမ်းစေသောအမူအကျင့်တစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးနမူနာအများစုသည်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောစွဲလမ်းမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည် (ဥပမာ ၅၈% × ၇၆% = စုစုပေါင်း၏ ၄၄%) နမူနာသည်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သည့်အပြုအမူ ၂ မှ ၄ ခုအထိခံစားနေရသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏တူညီသောနမူနာအတွင်းရှိသူတို့၏တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုများကိုစစ်ဆေးသောလေ့လာမှုများစွာကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုစီ၏ပျံ့နှံ့မှုကွဲပြားခြင်းသည်လက်ရှိပျံ့နှံ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်သက်တာကဲ့သို့သောအချက်များ၊ တိုင်းတာသောအပြုအမူသည်အလွဲသုံးစားမှုများသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အသက်ကဲ့သို့သောလူ ဦး ရေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်စစ်ဆေးခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်နိုင်သည်။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမျိုးရေး (ဥပမာ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှုန်းမြင့်မားနိုင်သည်။ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများတရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းထက်နှစ်ဆပိုများသည်။ အချို့သောစာရေးသူများကစျေးဝယ်စွဲမှုသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုများပြားသည်။ အနက်ရောင်, 2007; Sussman & Ames, 2008) ။ ထို့ကြောင့်လူ ဦး ရေအကြားစွဲစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခု (ဥပမာအမေရိကန်လူကြီးများ) ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုတွက်ချက်မှုများစွာကိုခွင့်ပြုမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောယူဆချက်များကိုဆန်းစစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ (က) စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုစီ၏လက်ရှိပျံ့နှံ့မှုကိုတွက်ချက်ရန်နှင့် (ခ) ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမတူညီသောယူဆချက်များအောက်တွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွဲဖက်ဖြစ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ (၁၁) ခု၏မည်သည့်အရာကိုမဆိုလက်ရှိပျံ့နှံ့မှုကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု။ ယေဘူယျအားဖြင့်လူ ဦး ရေတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းကိုအမေရိကန်လူကြီးများအပေါ်ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိအာရုံစူးစိုက်။ ဖြေရှင်းလိုသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၄ ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် - PsycINFO, OVID Medline (၁၉၅၀၊ 1950ပြီလပထမ ၂ ပတ်မှတဆင့်)၊ PubMed နှင့် Google Scholar ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ (၁၁) ခုနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအနှုန်းများမှာ“ ဆေးလိပ်စွဲခြင်း၊ ”“ နီကိုတင်းစွဲခြင်း၊ ”“ အရက်စွဲခြင်း၊ “ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ ” အလွန်အကျွံစွဲခြင်း၊ “ အစားအသောက်စွဲခြင်း၊ ” အစာစားခြင်းစွဲခြင်း၊ “ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ ” အလွန်အကျွံမှီခိုခြင်း၊ ” လောင်းကစားစွဲခြင်း၊ ” လောင်းကစားလောင်းခြင်း၊ ” ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ ၊ “ ၀ က်ဘ်စွဲလမ်းမှု”၊ “ ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ ”“ ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်း” (အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုသာရှာဖွေသည်)၊ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှု၊ “ ကာယလှုပ်ရှားမှုစွဲလမ်းခြင်း၊ ”“ လေ့ကျင့်ခန်းစွဲခြင်း၊ ”“ အလုပ်ကြိုးစားခြင်း၊ ”“ စွဲလမ်းမှု”၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုစီအတွက်အနည်းဆုံးအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆောင်းပါးများကိုစစ်ဆေးရန်ခေါင်းစဉ်များကိုပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ နောက်မူကြမ်းများဖြင့်နောက်ဆက်တွဲစာမူများကိုကူးယူခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောစာမူများ၏ကိုးကားထားသောကဏ္sectionsများကိုရှာဖွေမှုတွင်မတွေ့ရပါ။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးအနည်းငယ်ကိုတွေ့ရှိပါကအခြားအသုံးအနှုန်းများကိုကြိုးပမ်းခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုသာပျံ့နှံ့ခြင်း (သို့) စွဲစွဲခြင်းအသုံးအနှုန်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်းမရှိပဲရှာဖွေခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းကန ဦး ရှာဖွေမှုပေါင်း ၆၄၀ ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ ၃၂ ×ပျံ့နှံ့မှု / ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုအသုံးအနှုန်းများ×ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ၄ ခု) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းလေ့လာမှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုမည့်ပါဝင်မှုနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာအရွယ်အစားအနည်းဆုံးပါဝင်သူ ၅၀၀ ပါ ၀ င်သည့်ဥပမာများကိုသာဖော်ပြရန်လေ့လာခဲ့သည် Stucki & Rihs-Middel, 2007) ။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုအရှိဆုံးသောနမူနာများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ တစ် ဦး အထူးစွဲလမ်းအပြုအမူအဘို့အရရှိနိုင်လေ့လာမှုများအနည်းငယ်ရှိခဲ့လျှင်သို့သော်ကျနော်တို့စာသားထဲမှာသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အတူဒေတာ -based လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်၊ ရှာဖွေမှုတွင်ပါဝင်သောစွဲလမ်းမှုတွဲဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အခြေပြုလေ့လာမှုများအားလုံးသည်နမူနာအရွယ်အစားမခွဲခြားဘဲဤပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏စာသားတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအစမှအလတ် / သက်ကြီးသို့အရွယ်သို့ ၁၆ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အထိသို့သက်တမ်းတိုးအရွယ်ကိုငယ်သောအရွယ်မှ စ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသက်အပိုင်းအခြားပါသောဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အတွင်းရှိအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တတိယအချက်မှာ၊ အထူးသဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောနမူနာများ (ဥပမာ - တစ်ခုတည်းကျားမခွဲခြားမှုဓာတုပစ္စည်းမှီခိုမှုအတွင်းလူနာ) ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံးကိုလေ့လာခဲ့သောပျံ့နှံ့မှုလေ့လာမှုများသာပါဝင်သည်။ စတုတ္ထအချက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောစွဲလမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုညွှန်ပြသည့်မည်သည့်စိတ္တဗေဒကိုမဆိုပေးသည့်လေ့လာမှုများသာပါဝင်သည်။ Albrecht, Kirschner, & Grusser, 2007) ။ အလွန်သြဇာညောင်းသောဆောင်းပါးအချို့ရှိပြီးပျံ့နှံ့မှုအတော်အတန်ခန့်မှန်းရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းကိုစုစည်းခြင်း (ဖယ်ထုတ်ခြင်း) မှဖယ်ထုတ်ထားသည်။ Brenner, 1997, အင်တာနက်စွဲနှင့်ပတ်သက်။ ) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတွင်မကြာသေးမီကပါ ၀ င်မှု၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဓိကပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသာထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့မှုကိုသာတင်ပြသောလေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးခဲ့သည် (ခြွင်းချက်များကိုစာသားတွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
ပါ ၀ င်သည့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအချက်အလက်များကိုပြသထားသည် စားပွဲတင်2(n = 83 လေ့လာမှုများ) ။ ဤအချက်အလက်များသည်အလွန်အကျွံအစွန်းရောက်သောအပြုအမူများကို“ စွဲလမ်းခြင်း” အဖြစ်အတိုချုပ်ဖော်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်“ မှီခိုမှု” နှစ်ခုစလုံးကိုဇယားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွက်ချက်မှုများတွင်“ စွဲ” မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ "အန္တရာယ် -", "ပြproblemနာ" နှင့် "ရောဂါဗေဒ" လောင်းကစားတိုင်းတာကြောင်းလေ့လာမှုများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသာစားနပ်ရိက္ခာ (စဉ်းစားလျှင်အခြားအမျိုးအစားများနှင့်သီးခြားစီတင်ပြလျှင်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ အကယ်၍ အတိအကျမဖော်ပြထားပါကဒေတာသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် စားပွဲတင် 2) ။ လေ့လာမှုများအနှံ့စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ ၁၁ ခု၏ပျံ့နှံ့မှုတွက်ချက်မှုကို (ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိ) အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ပင်ကိုယ်မူလဒေတာများမှရရှိသောတန်ဖိုးအားလုံး၏နမူနာအရွယ်အစားကိုပျှမ်းမျှအားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်ကျား / မအလိုက်တွက်ချက်သည်။
နှင့်အတူလေ့လာမှု 11 စွဲ၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Co- ဖြစ်ပျက်မှု Nအနည်းဆုံး 500 မှာ s ကို
ပျံ့နှံ့မှုနှင့် Co- ဖြစ်ပွားမှု
အနည်းဆုံးဘာသာရပ် ၅၀၀ နမူနာအရွယ်အစားနှင့်လေ့လာမှု ၈၃ ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။စားပွဲတင် 2) ။ ဤလေ့လာမှု ၈၃ ခုတွင် ၁၂ ခုသည်စီးကရက်မှီခိုခြင်း၊ နီကိုတင်းစွဲခြင်း (၂ ခုသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ ၁၁ ခုရှိအနည်းဆုံးအခြားတစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုအချို့ကိုကြည့်သည်)၊ ၂၂ သည်အရက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / ဆန်းစစ်မှု ၂၀ ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည် (၃ ခုသည်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်သည်)၊ ၉ သည်အစားအစာမူမမှန် / စွဲလမ်းမှု (၂ ခုသည်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်သည်)၊ ၂၆ ခုသည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း (၂၆ ခုကိုပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်) )၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ၁၆ မှု (၄ င်းတို့ထဲမှ ၁ ခုသည်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်သည်)၊ ၂ စွဲစွဲလမ်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲမှု (ဤအရာများအားလုံးသည်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုများကိုမကြည့်ပါ)၊ လိင်စွဲလမ်းမှု ၄ ခု (၎င်းတို့ထဲမှ ၁ ခုသည်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်ရှုခြင်း)၊ စွဲ (ဤအရာအလုံးစုံမျှမပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်), 83 workaholism ဆန်းစစ် (ဤအဘယ်သူအားမျှ Co- ဖြစ်ပျက်မှုကိုကြည့်) နှင့် 12 စျေးဝယ် / အသုံးစရိတ် / စွဲဝယ်ယူဆန်းစစ် (ဤအဘယ်သူအားမျှ Co- ဖြစ်ပျက်မှုကြည့်ရှု) ။ ရလာဒ်များကိုအသက်အုပ်စု (သက်ကြီးရွယ်အိုဆယ်ကျော်သက်များ၊ ကောလိပ်ကျောင်းအရွယ်လူငယ်များ၊ ထို့နောက်လူကြီးများ) ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်။
ဆေးရွက်ကြီး / စီးကရက်နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်မှီခိုခြင်း
လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအကြားဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပျံ့နှံ့မှု၊ ဥပမာအားဖြင့် United States ရှိ Monitoring the Future (MTF) သုတေသနအဖွဲ့မှ (http://monitoringthefuture.org; မတ်လ 17, 2010 ရက်တွင်ဝင်ရောက်; Johnston, O'Malley, Bachman, & Schulenberg, 2009a, 2009b) ။ နေ့စဉ် (လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းရက်ပေါင်း ၂၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသော) စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင် ၁၁.၄% ရှိရာမှအသက် ၅၀ အရွယ်များ၌ ၁၇% အထိကွဲပြားသည်။Johnston et al ။ , 2009a, 2009b) ။ နေ့စဉ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်ဟုလေ့လာမှုတစ်ခုအရဆေးလိပ် (နီကိုတင်း) ကိုအထူးတိုင်းတာသည်။ အသက်ကြီးသောဆယ်ကျော်သက်များအကြားဆေးလိပ်စွဲခြင်း (မှီခိုခြင်း) သည် ၆% မှ ၈% အကြားခြားနားကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (Chen, Sheth, Elliott, & Yeager, 2004; လူငယ်တို့ et al ။ , 2002). ကွတ် (1987) သော်လည်း, ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဆေးရွက်ကြီးစွဲများအတွက် 9.6% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Dierker et al ။ (၂၀၀၇) ၀ င်လာသည့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏ ၄.၄% (ဆေးလိပ်သောက်သူအပြည့်အ ၀ ၏ ၄.၉%) သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး (၂၀၁၀) ကနေဒါကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၉၄ နှစ်အရွယ် 948% ၏အလားတူနမူနာများအကြားဆေးလိပ်မှီခိုမှုနှုန်းနိမ့်ကျနေမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Grant, Hasin, Chou, Stinson နှင့် Dawson (၂၀၀၄) အမေရိကန်အမျိုးသားအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု၏ ၁၂.၈% သည်ပျမ်းမျှအားတွေ့ရှိရသည် Falk, Yi, & Hiller-Sturmhofer, 2006). Goodwin၊ ကီးနှင့် Hasin (၂၀၀၉)အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအမေရိကန်အမျိုးသားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလူကြီးများအကြားဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုမှာ ၂၁.၆% နှင့် ၁၇.၈% အသီးသီးရှိသည်။ နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်သူများအကြားမှီခိုမှုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာမှုများနှင့်အတူတူပင်ပျံ့နှံ့နှုန်းကိုပြသနေပုံရသည်။ နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုသည်နိုင်ငံအလိုက်သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ ဥပမာ, Farrell et al ။ (၂၀၀၃) ဂရိတ်ဗြိတိန်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသောနမူနာကြီးများ၏ ၂၄% သည်နေ့စဉ်စီးကရက် ၁၀ ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသောက်ကြသည်။ Ulrich, ဟေးလ်, Rumpf, Hapke နှင့် Meyer (2003) ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုပျံ့နှံ့နှုန်း ၃၈.၆% ရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူ ဦး ရေတွင်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတာဆေးလိပ်မှီခိုမှုပျံ့နှံ့နှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် Hughes, Helzer, & Lindberg, 2006).
အရက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခို
MTF စစ်တမ်းတွင်လက်ရှိနေ့စဉ်သောက်သုံးမှုသည်အသက် ၁၈ မှ ၅၀ ကြားရှိလူငယ်များအကြား ၂.၈% မှ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိသော်လည်းပြdrinkingနာမှာအရက်သောက်ခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပေ (Johnston et al ။ , 2009a, 2009b) ။ ရံဖန်ရံခါအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သောက်ခြင်း ၅ ကြိမ်ထက် ပို၍ သောက်သုံးခြင်း) သည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင် ၂၅% မှ ၂၀ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအနက် ၄၂% သို့အသက် ၅၀ အရွယ်များအနက် ၂၀% အထိရှိသည်။ တနည်းကား, ဒီပြproblemနာကိုသောက်သုံးညွှန်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်နေ့စဉ်သောက်ခြင်း (လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၂၀ အတွင်းအချိုရည် ၅ ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) သည်အသက်အုပ်စုများတွင် ၁% အောက်လျော့နည်းခဲ့သည်။Gadalla & Piran, 2007; Johnston et al ။ , 2009a, 2009b) ။ တစ်နှစ်လျှင်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါ၊ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုမှု (ပေါ် အခြေခံ၍) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် [စတုတ္ထထုတ်ဝေ; DSM-IV] ယေဘုယျအားဖြင့်အသက်ကြီးသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက် ၁၀% ခန့်ရှိသည်ဟုတွက်ချက်သည် (အလက်ဇန်းဒါး & Schweighofer, 1989; Barnes, Welte, Hoffman, & Tidwell, 2009 [ပိုမိုမြင့်မား, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူတို့တွင် 15% မှာ]; ချန် et al ။ , 2004 [မြင့်မားသော, အသက်ကြီးသောဆယ်ကျော်သက်တို့တွင် 16.4% မှာ]; Cohen ကို et al ။ , 1993 အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အကြား ၁၄.၆%၊ ကွတ်, 1987; Essau & Hutchinson, 2008; Falk et al ။ , 2006; Farrell et al ။ , 2003 [အနိမ့်ဆုံး, ဂရိတ်ဗြိတိန်အရွယ်ရောက်သူတို့တွင် 5% မှာ]; ပြင်သစ်, Maclean, & Ettner, 2008; ပေးသနား et al ။ , 2004; Harford, Grant, ရီ, & Chen က 2005; Hasin, Stinson, Ogburn, & Grant, 2007 [အနိမ့်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အကြားအသက် ၅ နှစ်မှ ၅၀ ကြားလူငယ်များတွင် ၅.၈%၊ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ကြားလူငယ်များအကြား ၁၀-၁၅%၊ Hill, Rumpf, Hapke, Driessen, & John, 1998; Kandel, Chen, Warner, Kessler, & Grant, 1997 [ယေဘုယျအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၃.၆%၊ ယမန်နှစ်အခြေခံသောက်သူများ၏ ၅.၃% တွင်] [လျော့နည်းခြင်း]; Kilpatrick, Acierno, Saunders, Resnick, & Best, 2000; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀ [၁၉.၁ နှစ်အရွယ်ကနေဒါကောလိပ်ကျောင်းသား ၁၀.၂%]၊ နယ်လ်ဆင် & Wittchen, 1998 [၉.၉% သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဂျာမနီမှထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြား]; Poelen, Scholte, Engels, Boomsma, & Willemsen, 2005 [နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိတစ်သက်တာပြproblemနာ၊ ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များ]; Regier et al ။ , 1990 [အမေရိကန်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူစုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ ၄.၈% ရှိသော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်းမှသာ] Sussman & Ames, 2008; လူငယ်တို့ et al ။ , 2002 [အမေရိကန် ၁၇ မှ ၁၈ နှစ်ကြား ၁၅.၇%] ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာကာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏အရက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုပျံ့နှံ့မှုမှာ ၁၀% ခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဥပမာအရက်မှီခိုမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄% ရှိသည်။ Pirkola, Poikolainen, & Lonnqvist, 2006; Regier et al ။ , 1990; Teesson, Baillie, Lynskey, Manor, & Degenhardt, 2006).
ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုမှု
MTF စစ်တမ်းတွင်နေ့စဉ် (နောက်ဆုံးရက် ၃၀ တွင်ရက်ပေါင်း ၂၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသော) ဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်တွင် ၅.၄% နှင့် ၅၀ နှစ်အရွယ်များကြားတွင် ၂% အထိကွဲပြားသည်။Johnston et al ။ , 2009a, 2009b). Cohen ကို et al ။ (၁၉၉၃) အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အကြားရှိလူငယ်များအကြား 17% ၏ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ လူ ဦး ရေနမူနာများအကြားဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအချက်အလက်များအရ ၇% ခန့်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်လူကြီးများအကြားတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။Agrawal, Neale, Prescott, & Kendler, 2004; Barnes et al ။ , 2009; Coffey et al ။ , 2002; Hall, Degenhardt, & Patton, 2008; Kandel et al ။ , 1997; Kilpatrick et al ။ , 2000; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀; လူငယ်တို့ et al ။ , 2002), သို့သော် Chen, Sheth, Elliott, နှင့် Yeager (2004) ဆယ်ကျော်သက်အကြား 13.4% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့် Agrawal၊ Neale၊ Prescott နှင့် Kendler (၂၀၀၄) အမေရိကန်ကောလိပ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအကြားဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုနှုန်းမှာ ၁၈% နှင့် ၇.၅% အသီးသီးရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်, Compton, Grant, Colliver, Glantz နှင့် Stinson (2004), et al ပေးသနား။ (2004)နှင့် စတာလင်၊ ရူန်း၊ ပီကာနှင့် Grant (၂၀၀၆) အလွန်ကြီးမားသောနမူနာကိုအကဲဖြတ်ပြီးအမေရိကန်အထွေထွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေအကြားဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှု ၁.၅% ပျံ့နှံ့မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး (၁၈ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်း ၄% မှ ၅% ကြား)၊ Farrell et al ။ (၂၀၀၃) ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင် 1.8% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Kandel၊ Chen၊ Warner, Kessler နှင့် Grant (၁၉၉၇) US လူကြီးများအကြား ၀.၁% ပျံ့နှံ့မှု (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအသုံးပြုသူများအကြား ၉.၀% ပျံ့နှံ့မှု) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချို့သောလေ့လာမှုများတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါများပျံ့နှံ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ကောလိပ်ကျောင်းအရွယ်လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအကြား ၂% မှ ၅% အကြားကွဲပြားသည်။အလက်ဇန်းဒါး & Schweighofer, 1989; ချန် et al ။ , 2004; Cohen ကို et al ။ , 1993 (အသက် ၁၇ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အကြားရှိ ၁.၁% သည်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုတွက်ချက်မှုတွင်ရှင်းလင်းစွာဖယ်ထားခြင်း); ကွတ်, 1987; ပေးသနား et al ။ , 2004; Kandel et al ။ , 1997 [0.3% မှာနိမ့်; ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအခြေခံသုံးစွဲသူများအကြား ၁၁.၆%]; Kilpatrick et al ။ , 2000; Regier et al ။ , 1990; Sussman & Ames, 2008; လူငယ်တို့ et al ။ , 2002) ။ သို့သျောလညျး Agrawal et al ။ (၂၀၀၄) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးနှင့်အထီးအမွှာအတွဲ ၂,၁၂၅ အကြား ၉% နှင့် ၁၉.၂% တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှု (ဆေးခြောက်မှ လွဲ၍) နှုန်းကိုတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, Compton, Thomas, Stinson နှင့် Grant (၂၀၀၇)နှင့် Warner, Kessler, Hughes, Anthony နှင့်နယ်လ်ဆင် (1995)အမေရိကန်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၂ လအတွင်းတရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုမှု (ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ၂.၀% နှင့် ၁.၈% အသီးသီးရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေအကြားပျံ့နှံ့မှုမှာ ၂.၁% ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် (Farrell et al ။ , 2003) ။ ကနေဒါနိုင်ငံမှပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုနှုန်းသည် ၁% ခန့်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။Gadalla & Piran, 2007) ။ ဤလေ့လာမှုအရနောက်ဆုံး ၁၂ လတာကာလအတွင်းတရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုမှု (ဆေးခြောက်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ) ပျံ့နှံ့မှုအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လူကြီးများအနေဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅% ခန့်မှန်းထားသည် (မည်သည့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှုမှ ၁% မှ ၃% အထိ) ။ ဥပမာ၊ Regier et al ။ , 1990; Teesson et al ။ , 2006).
ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်နှင့်တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အတူတကွသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်အတူတကွဖြစ်ပွားခြင်း
လေ့လာမှုများစွာ ((၄ ခုမှသာအကြောင်းအရာ ၅၀၀ နှင့်အထက်နမူနာများပါဝင်သည်) သည်အမေရိကန်နှင့်အခြားဒေသများရှိလူငယ်များနှင့်လူကြီးများအကြားစီးကရက်၊ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါ ၃၀ မှ ၆၀% ထိအတူတကွဖြစ်ပွားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Essau & Hutchinson, 2008; Falk et al ။ , 2006; Ford ကား et al ။ , 2009; Kaufman၊ ၁၉၈၂; Miller ကရွှေ, & Klahr, 1990; Palmer က et al ။ , 2009 [တစ်သက်တာအသုံးပြုမှု -based]; Regier et al ။ , 1990 [တစ်သက်တာအသုံးပြုမှု -based]; Stinson, Ruan, Picering, & Grant က, 2006; Sussman & Ames, 2008) ။ သို့သော်ကြီးမားသောဂျာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာတွင်ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာကာလအတွင်းအရက် ၁၈.၄% သာအရက်အန္တရာယ်ရှိသောသုံးစွဲမှု / အလွဲသုံးစားမှု၊Ulrich, Hill, Rumpf, Hapke, & Meyer, 2003).
နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်၌တည်၏ Holderness၊ Brooks-Gunn နှင့် Warren (၁၉၉၄), သေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုသုံးခုရှိခဲ့သည်ns = 20, 27, နှင့် 138) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% ကိုလည်းအစားအစာရောဂါ (bulimia သို့မဟုတ် bulimic အပြုအမူ) ပြသကြောင်းညွှန်ပြ Freimuth et al ။ (၂၀၀၈) ဒီ Co- ဖြစ်ပျက်မှု 35% မှာပိုမိုမြင့်မားသည်အကြံပြုနှင့် Lesieur နှင့် Blume (၁၉၉၃) Co- ဖြစ်ပျက်မှုအသက်အရွယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်အဟောင်းတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့တွင်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Lesieur နှင့် Blume (၁၉၉၃) အမျိုးသမီးအရက်သမားလေ့လာမှုတစ်ခုn = 31) အရက်မူးခြင်းလက္ခဏာများနှင့်အတူလက်တွေ့အစားအစာရောဂါနှင့်အတူ 36% ပြသ 21% ပြသခဲ့သည်။
နမူနာအရွယ်အစားအနည်းဆုံး ၅၀၀ ရှိသည့်လေ့လာမှုငါးခုသည်ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများခံစားနေရသောသူတို့တွင်အခြားစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ ၈ ခုနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့ပြီးထိုအရာအားလုံးသည်လောင်းကစားစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။Cunningham-Williams, Cottler, Compton, Spitznagel, & Ben-Abdallah, 2000 [တစ်သက်တာအသုံးပြုမှု]; ပြင်သစ် et al ။ , 2008; Griffiths, Wardle, Orford, Sproston, & Erens, 2010; Toneatto & Brennan, 2002; Welte, Barnes, Wieczorek, Tidwell, & Parker, 2001) ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က“ ဆေးလိပ်သောက်သူ” ဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သောဂရိတ်ဗြိတိန်မှအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနက် ၁.၁% သည်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာကိုတင်ပြကြသည် (Griffiths က et al ။ , 2010) ။ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ များသောအားဖြင့်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်များသောသောက်သူများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအရက်သေစာသောက်သုံးသူတို့တွင် ၃-၅% သည်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ပြင်သစ် et al ။ , 2008; Griffiths က et al ။ , 2010; Lesieur, Blume, & Zoppa, 1986; Toneatto & Brennan, 2002အမေရိကန်လူကြီးများကိုကိုယ်စားပြုသောနမူနာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အရက်မှီခိုသူ ၂၄% သည်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာကိုလည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။Welte et al ။ , 2001) ။ အသက် ၁၃၇ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားရှိပြင်ပလူနာအလွဲသုံးစားပြုသူများ (အရက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှု) ၏အဆင်ပြေမှုနမူနာတွင် ၁% သာ (n = 1) လောင်းကစားစွဲလမ်းများအတွက်စံနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် (Kaminer, Burleson, & Jadamec, 2002) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ ၉၉၀ (၂၈% မှသက်သာစေသောဆေးကိုမှီခိုနေပြီး ၇၇% သည်လှုံ့ဆော်သူကိုမှီခိုသည်) တွင်နမူနာ ၁၁% ကရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများဖြစ်သည် (အစီရင်ခံသည်)Cunningham-Williams က et al ။ , 2000 [တစ်သက်တာအသုံးပြုမှု]) နှင့်အခြားအများအားဖြင့်အသေးစားသုတေသနများအရမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု၏ ၅ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲသူများဖြစ်သည်။Freimuth et al ။ , 2008; Lesieur & Blume, 1993; Lesieur, Blume, & Zoppa, 1986; Petri, 2007; Spunt, Dupont, Lesieur, Liberty, & Hunt, 1998; Steinberg, Kosten, & Rounsaville, 1992; Toneatto & Brennan, 2002).
Freimuth et al ။ (၂၀၀၈) ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထို့အပြင်ပြကြောင်းခန့်မှန်း; သို့သော်တစ် ဦး အစီရင်ခံစာမှန်းဆဖြစ်ပါတယ်။ Griffin-Shelley (၁၉၉၅) မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေသူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုခံစားနေရသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် စီးကရက်သောက်သူ၊ အရက်အလွဲသုံးသူ၊ သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားတွင်အခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်တွဲဖက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည့်အခြားလေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။
လူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးမျိုးထဲမှ ၅၀% နှင့်ထပ်တူကျနေလျှင်အမေရိကန်လူကြီးများတွင်စီးကရက်၊ အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါး) စွဲခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုကို ၁၅%၊ ၁၀% နှင့် ၅% အသီးသီးခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်လျှင်ထိုစွဲလမ်းမှုတစ်ခုစီ၏ထက်ဝက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၁၅% သည်စီးကရက်၊ အရက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးထပ်နေသည်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ) ။ အပြုသဘောဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးလိပ်၊ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုတို့အကြား ၅၀% ထပ်နေသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ ထို့အပြင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာအနည်းငယ်အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကြည့်ပါ) Lacey & Evans, 1986), စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူ, အရက်အလွဲသုံးစားလုပ်, ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ 20% သည်အခြားစွဲချက်ရှစ်မဆိုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ။ ဒီမှာပုံဖော်ထားသည် စားပွဲတင် 3.
ကွဲပြားသောစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ ၁၁ ခု၏ခန့်မှန်းခြေပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပွားမှု
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသက်ကြီးရွယ်အိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားတွင် (အထူးသဖြင့် BED) အစားအစာမမှန်မှုပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည် ၁ မှ ၂% အတွင်းကွဲပြားခဲ့သည်။Allison, Grilo, Masheb, & Stunkard, 2005; Gadalla & Piran, 2007; Gleaves & Carter က, 2008; ဟေး, 1998; Hoek & Hoeken, 2003 [ကြီးမားသောလေ့လာမှုလေးခုကိုသူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ကိုးကားထားသည်၊ သို့သော်အမျိုးသမီးသုံး ဦး သာအမျိုးသမီးများကိုသာစစ်ဆေးခဲ့သည်]; Smith, Marcus, Lewis က, Fitzgibbon, & Schreiner, 1998; Spitzer et al ။ , 1992; Timmerman, ဝဲလ်, & Chen က 1990 [bulimia nervosa ဆန်းစစ်]) သော်လည်း Goossens, Soenens နှင့် Braet (၂၀၀၉) ဘယ်လ်ဂျီယံဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအကြားတွင် ၇.၄% သောပျံ့နှံ့မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကွတ် (1987) အမေရိကန်ကောလိပ်လူငယ်များအကြား (၆.၄%) ပျံ့နှံ့မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး (၂၀၁၀) 14.9 နှစ်အရွယ်ကနေဒါကောလိပ်လူငယ်များအကြား 19% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Lewinsohn, Seeley, Moerk နှင့် Striegel-Moore (၂၀၀၂)3နှစ်အရွယ်များအတွက် 4-24% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Spitzer et al ။ (1992) (အတန်အသင့်အဝလွန်ခဲ့ကြသူ) ဆေးရုံ - ဆက်စပ်အလေးချိန်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်များကိုပါဝင်သူများအကြားတစ် ဦး 30.1% ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ (အနည်းဆုံးဘာသာရပ် ၅၀၀ နမူနာပါ ၀ င်သော ၁၂ ခုအနက် ၉) သည်အမေရိကန်လူကြီးများအကြားစားသုံးမှုစွဲလမ်းမှုအတွက်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတာပျံ့နှံ့မှုနှုန်း ၂% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
အဓိကအားဖြင့်နမူနာပုံစံငယ်များ (အမျိုးသမီးများအများစုပါဝင်သည်) တွင်အစာသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများ (အချိုမှုန့်အမျိုးအစား) အစာစားခြင်းရောဂါရှိသည့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်သူများ၏ ၂၀% မှ ၄၆% ကြားတွင်တွေ့ရှိရသည် (Freimuth et al ။ , 2008; Gleaves & Carter က, 2008; Holderness, Brooks-Gunn, & Warren, 1994; Lacey & Evans, 1986; Lewinsohn et al ။ , 2002; Timmerman et al ။ , 1990 [အရက်သေစာအလွဲသုံးမှု၊ ယောက်ျား ၆% ခန့်နှင့် bulimia ရှိအမျိုးသမီး ၂၃%])၊ အစာသို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါ (၉၀) တွင်မိန်းမငယ် (၉၀) နှင့်ဆယ်ကျော်သက် (၅) ဦး ၏ (၁) ရာခိုင်နှုန်းသာအစာစားခြင်း။ကက်စထရို - Fornieles et al ။ , 2010).
Lewinsohn et al ။ (၂၀၀၂) BED နှင့်အတူယောက်ျားများအကြားတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများမဟုတ်၊ သို့ရာတွင်ရာခိုင်နှုန်းထပ်နေသည်ကိုအစီရင်ခံခြင်းမရှိပါ။ Freimuth et al ။ (၂၀၀၈) အစာစားခြင်းမမှန်သည့်သူများ၏နမူနာသေးငယ်သည့်နမူနာများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်မှာ ၃၉ မှ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှင့် ၁၅% သည် ၀ ယ်မှုစွဲခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Faber၊ Christenson၊ De Zwaan နှင့် Mitchell (၁၉၉၅)BED ပါ ၀ င်သောအ ၀ လွန်အမျိုးသမီး ၈၄ မျိုး၏နမူနာတွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်မဖြစ်မနေ ၀ ယ်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် (အဝလွန်အမျိုးသမီး BED မဟုတ်သောဘာသာရပ်များ၏ ၄.၄% နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်) ။ Faber et al ။ ထို့အပြင်သူတို့၏အစောပိုင်းအလုပ်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ ၂၃.၈% သည်အတင်းအကျပ် ၀ ယ်သူများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းများနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာသည့်အခြားလေ့လာမှုများမရှိသေးပါ အပြုသဘောဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အစာစားခြင်းရောဂါရှိသူ ၂၅%၊ အထူးသဖြင့် BED သည်အခြားစွဲလမ်းမှု ၁၀ ​​ခုအနက်တစ်ခုစီကိုခံစားရသည်။
အကြီးစားနမူနာများနှင့် meta-analysis နှင့်ပတ်သက်သောမြောက်အမေရိကသုတေသနလေ့လာချက်များအရ ၂.၁% မှ ၁၀% အထက်လူငယ်များသည်လောင်းကစားပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသည်။Barnes et al ။ , 2009; Gupta & Derevensky, 2008; Ladouceur, Boudreault, Jacques, & Vitaro, 1999a; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀; Shaffer & ခန်းမ, 2001 [meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ]; Shaffer, ခန်းမ, & Vander Bilt, 1999 [meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ]; Welte, Barnes, Tidwell, & Hoffman, 2008; Westphal, Rush, Steven, & Johnson, 2000; Winters, Stinchfield, & Fulkerson, 1993) ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားလောင်းကစားခြင်းပြProbleနာသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အားဖြင့်အကြီးစားလေ့လာမှုများ၏မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ် Volberg၊ Gupta၊ Griffiths၊ Olason နှင့် Delfabbro (၂၀၁၀) မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် Oceania ရှိဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစားခြင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ မြောက်အမေရိကနိုင်ငံများမှတင်ပြသောပြproblemနာ / ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှုန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - သြစတြေးလျ၊ ၁-၁၃%၊ ဒိန်းမတ် ၀.၈%၊ အက်စ်တိုးနီးယား ၃.၄%၊ ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ၂.၃%၊ ဂျာမနီ၊ ၃%၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်, 1-13%; အိုက်စလန်, 0.8-3.4%; အီတလီ၊ ၆%၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ 2.3-3%; နယူးဇီလန်, 2-5.6%; နော်ဝေးတွင် ၁.၈-၃.၂%၊ ရိုမေးနီးယား ၇%၊ စပိန် 1.9-3%; နှင့်ဆွီဒင်, 6% ။ ဤပြောင်းလဲမှုသည်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာကိုတိုင်းတာရန်၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏လောင်းကစားဥပဒေများသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနမူနာနည်းလမ်းများ၏တင်းကြပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကွတ် (1987) ကောလိပ်လူငယ်များအကြား 2.4% ၏ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့နှင့် Lesieur et al ။ (1991) အမေရိကန်ပြည်နယ် ၅ ခုရှိကောလိပ်လူငယ်များအကြားနမူနာ ၄-၈% တွင်တွေ့ရှိရသည်။ အရွယ်ရောက်သူများတွင်လောင်းကစားစွဲလမ်းမှုသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၁% မှ ၃% အကြား၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ နော်ဝေး၊Becona၊ ၁၉၉၃; Bondolfi, Osiek, & Ferrero, 2000; ကွတ်, 1987; Desai, Desai, & Potenza, 2007; ပြင်သစ် et al ။ , 2008; Griffiths က, 2009a; Griffiths က, 2009b; Ladouceur, Jacques, Ferland, & Giroux, 1999b; Petri, 2005, 2007; Philippe & Vallerand, 2007; Schofield, Mummery, Wang, & Dickson, 2004 [တစ်သက်တာ]; Shaffer et al ။ , 1999; Shaffer & ခန်းမ, 2001; Sommers၊ ၁၉၈၈; Stucki & Rihs-Middel, 2007; Volberg၊ ၁၉၉၄ [တစ်သက်တာ]; Volberg & Steadman, 1988 [တစ်သက်တာ]; Wong & So, 2003နမူနာကြီးမားသောနမူနာလေ့လာမှုနှစ်ခုသည်နော်ဝေအရွယ်ရောက်သူများတွင် ၀.၁၅% တွေ့ရှိရသည် (Gotestam & Johansson, 2003) နှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တို့တွင်အမေရိကန်လူကြီး ၄.၂% (Feigelman, Wallisch, & Lesieur, 1998 [တစ်သက်တာအတိုင်းအတာ]) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက် (ဥပမာ - မြောက်အမေရိကရှိဘော်ရီဂျင်နီလူ ဦး ရေ) အချို့သောထူးခြားသောလူ ဦး ရေတွင်လက်ရှိရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည်ပျံ့နှံ့နှုန်းမှာ ၁၅% အထိမြင့်တက်နိုင်သည် Wardman, el-Guebaly, & Hodgins, 2001) ။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာကာလအတွင်းလောင်းကစားစွဲမှုသည်အမေရိကန်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၂% ဖြစ်သည်။
အကြီးစားဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြီးသောလောင်းကစားသမားများအနက်အရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ၃၆% ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။Barnes et al ။ , 2009) နှင့် 59% (Westphal et al ။ , 2000) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလောင်းကစားစွဲသူများအကြားနမူနာ ၄၁ မှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လက်ရှိစီးကရက်သောက်သူများဖြစ်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် (Becona၊ ၁၉၉၃; Desai et al ။ , 2007; Petri, 2007 [ပြန်လည်သုံးသပ်]; Potenza, Steinberg, Wu, Rounsaville, & O'Malley, 2006) ။ နမူနာပုံစံငယ်များစွာတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးလောင်းကစားစွဲသူများ၏ ၄ မှ ၁၁.၄% သည်အရက်စွဲကြသည် (Black & Moyer, 1998; Lesieur & Rosenthal, 1991; Netemeyer et al ။ , 1998) ။ လောင်းကစားဟယ်လိုင်းဟုခေါ်သောလောင်းကစားစွဲစွဲသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏နမူနာတစ်ခုတွင် ၁၈% ကအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများ (Potenza et al ။ , 2006) နှင့်စပိန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်လူကြီးများနမူနာတွင်လောင်းကစားစွဲစွဲလမ်းသောအရွယ်ရောက်သူများ၏ ၁၄% နှင့် ၃၆% တို့သည်အရက်အလွဲသုံးစားမှုကိုတင်ပြကြပါသည်။Bondolfi et al ။ , 2000) ။ လောင်းကစားစွဲသူများ၏ ၂၅% နှင့် ၃၃% သည်အမေရိကန်လူမျိုးလူကြီးများနမူနာများမှနမူနာများကိုအရက်မှီခိုနေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (Desai et al ။ , 2007; Welte et al ။ , 2001).
အရွယ်ရောက်ပြီးသောလောင်းကစားစွဲသူများ၏နမူနာသေးငယ်သည့်နမူနာများတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြproblemsနာများနှင့်အတူ ၂% မှ ၁၃% အထိကွဲပြားသည်။Black & Moyer, 1998; Lesieur & Rosenthal, 1991; Netemeyer et al ။ , 1998; Petri, 2007; Potenza et al ။ , 2006); သို့သော်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ကြီးမားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရလောင်းကစားစွဲသူ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပြproblemနာကိုဖော်ပြခဲ့သည်Feigelman et al ။ , 1998).
အရွယ်ရောက်ပြီးသောလောင်းကစားစွဲသူများ၏နမူနာအမြောက်အများတွင် ၃၃% သည်အ ၀ လွန်သူများဖြစ်သည်။Desai et al ။ , 2007) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလောင်းကစားသမားအယောက် ၃၀ ၏နမူနာတွင် ၆% ကအစာစားခြင်းရောဂါ (Black & Moyer, 1998) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးလောင်းကစားစွဲလမ်းသူ ၂၂၅ ယောက်အနက် ၁၉.၆% သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများနှင့်လည်းကိုက်ညီသည် (Grant & Steinberg, 2005). Lesieur နှင့် Rosenthal (၁၉၉၁) အရွယ်ရောက်ပြီးသောလောင်းကစားစွဲသူများ (Adkins နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်) ၏နမူနာငယ်များဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်နှစ်ခုစာတမ်းများမှ ၁၂% နှင့် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်အစွဲစွဲလမ်းသူများ၊ ၂၄% သည်စျေးဝယ်စွဲသူများ (အမျိုးသမီးများအားလုံး) နှင့် ၂၀% သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးအားလုံး။ Kausch (၂၀၀၃) အရွယ်ရောက်ပြီးသောလောင်းကစားစွဲသူ ၉၄ ဦး တွင် ၃၀.၉% သည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီး ၂၄.၅% သည် ၀ ယ်ခြင်း / ဝယ်ခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အားဖြင့်လေ့လာမှုမှာ Netemeyers et al ။ (1998) အရွယ်ရောက်ပြီးလောင်းကစားစွဲသူ (၄၄) ဦး တွင် (၂၉.၃) ရာခိုင်နှုန်းသည်မူးယစ်ဆေး ၀ ယ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည် လောင်းကစားစွဲသူများအကြားအခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားဒေတာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး, ငါတို့လောင်းကစားစွဲ၏ 50%, 30% နှင့် 20% ကိုလည်းအသီးသီးစီးကရက်, အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားခန့်မှန်းချက်များကအကြံပြုသောသူတို့အားဆင်တူသည် Lesieur နှင့် Blume (၁၉၉၃)။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပူးတွဲဖြစ်စဉ်ခန့်မှန်းချက်များကအကြံပြုထားသည့်ခန့်မှန်းချက်များထက်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည် Freimuth et al ။ (၂၀၀၈)နှင့် Kausch (၂၀၀၃), ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ရေကူးကန်ဆိုသော်ငြားလေ့လာမှုများပိုကြီးတဲ့ရေကန်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ထို့အပြင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလောင်းကစားစွဲသူများ၏ ၂၀% သည်အခြားစွဲလမ်းမှု ၇ ခုအနက်မည်သည့်အရာကိုမဆိုခံစားနေရသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်သည်။ လောင်းကစားခြင်းတွင်အထီးကျန်ဆန်သောအပြုအမူများပါဝင်လေ့ရှိပြီးလေ့ကျင့်ခန်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုနိမ့်ကျကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဆန့်ကျင်ဘက်ထင်မြင်ချက်များကိုထောက်ခံရန်အချက်အလက်မရှိပါ။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောဖင်လန်နိုင်ငံမှအသက် ၁၂ နှစ်၊ ၁၄ နှစ်၊ ၁၆ နှစ်နှင့် ၁၈ နှစ်လူငယ်များသည် ၁.၇% နှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ ၁.၄% သာလျှင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (Kaltiala-Heino, Lintonen, & Rimpela, 2004) ။ ကိုရီးယားတွင် ၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားရှိကျောင်းများအတွက်အခြေခံသောအဆင်ပြေမှုနမူနာ ၁.၆% သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (ကင်မ် et al ။ , 2006) ။ သို့သော်၊ ကိုရီးယားတွင်နောင်လေ့လာမှုတွင်အလားတူထည့်သွင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အမှတ်များကို အသုံးပြု၍ ၉၀၃ မှ ၁၄ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားရှိကျပန်းကျောင်းနမူနာများ၏ ၁၀.၇% သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (ပန်းခြံကင်မ် & Cho, 2008) ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားလူငယ်များ၏နမူနာ ၂.၄% (ဆိုလိုသည်မှာအသက် ၁၅ နှစ်) သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် (Cao & Su, 2006).
များသောအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏များပြားလှသောနမူနာများကိုလေ့လာခြင်းကအင်တာနက်သုံးစွဲမှုကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅.၉-၉.၃%၊ လူမှုဆက်သွယ်မှုနှင့်အထီးကျန်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။အန်ဒါဆင်, 2001; Chou & Hsiao, 2000 [တိုင်ဝမ်တွင်]၊ Kubey, Lavin, & Barrow, 2001; Morahan-Martin & Schumacher, 2000 [277 အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ]) ။ သို့သော် Grusser၊ Thalemann နှင့် Griffiths (၂၀၀၇) အင်တာနက်ဂိမ်းကစားသူ ၇၀၀၀ ကျော်၏နမူနာ ၁၁.၉% သည် (အသက် = ၂၁ နှစ်သက်တမ်းရှိ) ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှအွန်လိုင်းဂိမ်းများတွင်စွဲစွဲလမ်းစေခဲ့သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, Niemz, Griffiths and Banyard (၂၀၀၅) ဗြိတိသျှကောလိပ်ကျောင်းသား ၃၇၁ ယောက် (အမျိုးသား ၂၈.၇% နှင့်အမျိုးသမီး ၉.၅%) တို့တွင် ၁၈.၃% ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး Leung (၂၀၀၄) ဟောင်ကောင် ၁၆-၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိများစွာသောနမူနာများအနက် ၃၇.၉% သည်လက်ရှိအခြေအနေကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Fortson၊ Scotti၊ Chen၊ Malone နှင့် Del Ben (၂၀၀၇) ကောလိပ်လူငယ်များ၏နမူနာ ၂၁.၉% သည်အင်တာနက်ကိုအလွဲသုံးစားမှုအတွက်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း ၁.၂% သာလျှင်အင်တာနက်မှီခိုမှုအတွက်စံနှုန်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောနမူနာကြီးများတွင် ၃.၅ မှ ၉.၆% သည်အင်တာနက်စွဲသူများဖြစ်သည် (Cooper, Morahan-Martin, Mathy, & Maheu, 2002; Greenfield, 1999; Whang, Lee, & Chang, 2003) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Greenfield (၁၉၉၉) အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြေဆိုသူ ၁၇,၂၅၁ ယောက်နှင့်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုမှပစ္စည်း ၁၀ ခုကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်စွဲခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည် DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဘို့စံ။ ဖြေကြားသူ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်ဟု Greenfield ကဖော်ပြခဲ့သည်။ A နိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့ ၀.၇% ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Aboujaoude၊ ကုရ်အာန်၊ Gamel၊ အကြီးစားနှင့် Serpe (၂၀၀၆)အမေရိကန်ကျပန်းလူ ဦး ရေ၏ကျပန်းဂဏန်းဖြင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအားဖြင့်နော်ဝေအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အလွှာ ၁.၀% ပျံ့နှံ့မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။Bakken, Wenzel, Gotestam, Johansson, & Oren, 2009) ။ ထို့ကြောင့်သုတေသနစံနှုန်းများသည်ပိုမိုတင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှလူအများစုပါ ၀ င်သည် (ဆိုလိုသည်မှာအခြေခံမဟုတ်သောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများနှင့်အခြေခံသုံးစွဲသူများပါဝင်သည်) နှင့်လူကြီးများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းများပါဝင်လာသည်နှင့်အမျှပျံ့နှံ့မှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည် (ဥပမာ - Shaw & Black, ၂၀၀၈) ။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လတာကာလအတွင်းအမေရိကန်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်တာနက်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၂% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံရှိဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနက်အင်တာနက်စွဲသူများ၏ ၁၃.၆% သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခံစားခဲ့ရသည်။Bakken et al ။ , 2009). Shapira et al ။ (၂၀၀၃)2သေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ် (n = 21 နှင့် 20) က Black နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် Shapira နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ။ ဤလေ့လာမှုများအရပျမ်းမျှအားဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းသူ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရက်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှု၊ ၅% ကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုမှု၊ ၁၀% ကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ၅% ကလောင်းကစားစွဲခြင်း (Shapira လေ့လာမှုကိုသာလေ့လာခြင်း) နှင့် ၁၀% ကလိင်စွဲ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတင်ပြသည် ရောဂါများ။ ၂၃ နှစ်အရွယ်အင်တာနက်စွဲလမ်းသူ ၁၅ ဦး ကိုလေ့လာရာတွင်လူတစ် ဦး (နမူနာ ၇.၅%) သည် BED ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။Bernardi & Pallanti, 2009) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းသူများအကြားအခြားစွဲလမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးသောအခြားလေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်တာနက်စွဲစွဲသူများ၏ ၁၀% သည်အခြားစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ (၁၀) ခုအနက် ၁ ခု၏စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
ကွတ် (1987) အမေရိကန်ကောလိပ်လူငယ်များအကြားအချစ်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတွင်ပျမ်းမျှ ၂၅.၉% နှင့် ၁၆.၈% အသီးသီးရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ MacLaren နှင့်အကောင်းဆုံး (၂၀၁၀) ဆက်ဆံရေးကိုလက်အောက်ခံခြင်း / ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲခြင်းအတွက် ၁၁.၉% နှင့် ၉၄၈ ခုနှစ်၊ ၁၉ နှစ်အရွယ်ကနေဒါကောလိပ်လူငယ်များအကြားလိင်ဖြည့်စွက်မှုအတွက် ၁၀.၃% ခန့်မှန်းထားသည်။ အလားတူစွာ၊ ကောလိပ်ကျောင်းသား ၂၄၀ ၏နမူနာတွင်၊ Seegers (၂၀၀၃) ၁၃.၅% သည်လိင်အရစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံရသည်။ Cooper, Morahan-Martin, Mathy နှင့် Maheu (၂၀၀၂) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်တာနက်အသုံးပြုသူအများစုတွင် ၉.၆% သောအွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သုတေသီအများစုသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့ခြင်းအားအထွေထွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၃ မှ ၆% တွင်ထားရှိသည် (Freimuth et al ။ , 2008; Krueger & Kaplan, 2001; Kuzma & Black က, 2008; Sussman, 2010) ။ အမေရိကန်လူကြီး ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲသူများဖြစ်ပြီး ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းသည်
Griffin-Shelley (၁၉၉၅) အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စွဲလမ်းသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေရသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည် Carnes (1991) သူ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စွဲလမ်းသူ ၉၃၂ ဦး တွင် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အစာစားခြင်းရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ အလားတူစွာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနေအိမ်ရာကုသမှုလိင်စွဲလမ်းသူ ၁,၆၀၄ ဦး ၏နမူနာတွင်၊ Carnes, Murray နှင့် Charpentier (2005) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်နီကိုတင်းကိုစွဲစွဲလမ်းကြောင်း ၄၆%၊ အရက်ကိုစွဲစွဲလမ်းကြောင်း ၄၀%၊ အခြားပစ္စည်းများနှင့်ဆေးစွဲမှု ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကစားသုံးခြင်းကိုစွဲလမ်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး ၆% ဟာလောင်းကစားကိုစွဲလမ်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး ၁၂% ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့စွဲလမ်းကြောင်း ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ နှင့် ၃၁% ကစျေးဝယ် / ဝယ်ခြင်းအပေါ်စွဲကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Kuzma နှင့် Black (၂၀၀၈) အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမှု (၃) ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။n Black က et al အားဖြင့် = 36, 26 နှင့် 25 ။ , Kafka & Prentky နှင့် Raymond et al ။ ) ။ ဤလေ့လာမှု ၃ ခုတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လိင်စွဲလမ်းသူ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါအချို့ကိုဖော်ပြသည်၊ ၆% ကအစာစားခြင်းရောဂါ၊ ၅% ကလောင်းကစားစွဲခြင်းနှင့် ၅% က ၀ ယ်ခြင်း / စျေး ၀ ယ်ခြင်းစွဲလမ်းမှုများကိုအစီရင်ခံကြသည်။ လေ့လာမှု ၅ ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး Freimuth et al ။ (၂၀၀၈) အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စွဲလမ်းသူ ၃၉–၄၂% သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါများခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၂-၃၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အစာစားခြင်းရောဂါဖြင့်ခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ၄-၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်လောင်းကစားများ၊ စွဲဝယ်ယူ။ ပြီးပြည့်စုံသောလေ့လာမှုအနည်းငယ်အပေါ် အခြေခံ၍ အချစ်စွဲသူများ၏ ၅၀% သည်လိင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်ပြီးစကားပြောတတ်ကြသည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါသုံးမျိုးနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုတို့ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုသည် ၄၀% ဖြစ်ပြီး၊ ကျန် ၆ ခုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာသည် ၂၀% ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းကိုအမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၃% မှ ၅% အထိပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။Allegre et al ။ , 2006; ကွတ်, 1987; Down, Hausenblas, & Nigg, 2004; တယ်ရီ၊ ဆာဘို၊) ။ ကောလိပ်လူငယ်များ၏လေ့လာမှုအချို့သည်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း ၂၁.၈ မှ ၂၅.၆% အထိမြင့်တက်ခဲ့သည် (Garman, Hayduk, Crider, & Hodel, 2004; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ယနေ့အထိပြီးစီးခဲ့လေ့လာမှုများ၏အများစုသည်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ် (Hausenblas & Down, 2002) ။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုအခြေခံပြီး၊ အမေရိကန်လူကြီးများအကြားပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာလေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှီခိုမှုသည် ၃% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ အရွယ်ရောက်သူများမှာအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုအထိုင်များလာတတ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှီခိုနေရသူ (မူလလေ့ကျင့်ခန်းအပိုဆောင်း)၊ အခြားရောဂါများနှင့်အတူနမူနာအရွယ်အစားအနည်းဆုံး ၅၀၀ ရှိသည့်အခြားရောဂါများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းစွဲခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ အစာစားခြင်းရောဂါ (ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းစွဲ) ရှိသူများနှင့်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောများစွာသောအသွင်အပြင်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြသောအခြားသူများလည်းရှိကြသည် (Bamber, Cockerill, & ကာရိုး, 2000) ။ ပါရီမြို့ရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ၁၂၅ ဦး အနက် (၇ နှစ်၏ ၃ ချက်နှင့်အထက်သတ်မှတ်ထားပြီးအသက် = ၂၈.၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ ) ၂၀% သည်နီကိုတင်းကိုမှီခိုမှု၊ ၈% ကအရက်ကိုမှီခိုအားထားခြင်း၊ ၇၀% ကအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ၆၃% ကစျေးဝယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် စှဲလမျးသူ (Lejoyeux, Avril, Richoux, Embouazza, & Nivoli, 2008) ။ သူတို့ကတရားမ ၀ င်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေထက်နှစ်ဆလောက်ပိုများတတ်ပြီးစျေးဝယ်သူတွေဖြစ်ပေမယ့်စီးကရက်နဲ့အရက်တို့အပေါ်မှီခိုအားထားမှုမရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ အမေရိကန်လူငယ်အရွယ်အမျိုးသမီး ၂၆၅ ယောက်အနက်အပြေးသမားများနှင့်အပြေးသမားမဟုတ်သူများသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်တစ်ပတ်လျှင်မိုင် ၃၀ ကျော်ပြေးသောလူများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် anorexia nervosa အတွက်အန္တရာယ်များသည် (Estok & Rudy, 1996) ။ လေ့ကျင့်ခန်းစွဲသူများ၏ ၁၅% သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းများဖြစ်ပြီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကကျန်သောစွဲလမ်းမှုများကိုပြသသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ သို့သော်ဤတွင်သုတေသနများစွာလိုအပ်သည်။
နမူနာအမြောက်အများတွင်အလုပ်လက်မဲ့ပြန့်ပွားမှုနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၈ မှ ၁၇.၅% ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် (Burke က, 1999, 2000; ကွတ်, 1987; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀) ကောလိပ်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၂၃ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုနမူနာသေးသေးလေးများ၌ဖော်ပြထားသည်။Doerfler & Kammer, 1986 အမျိုးသမီးရှေ့နေများ၊ ဆေးသမားများနှင့်စိတ်ပညာရှင် / ကုသသူများ၊ Freimuth et al ။ , 2008) ။ သို့သော်အခြားသူများကယူအက်စ်လူ ဦး ရေ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာအလုပ်သမားများဖြစ်သည် (Machlowitz, ၁၉၈၀) ။ ယာယီအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်သမားများအကြားပျံ့နှံ့မှုသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၁၀% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
အခြားစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်မြှုပ်မှုနှင့်ပူးတွဲပါ ၀ င်မှုအကြောင်းအနည်းငယ်သောသာမန်အစီရင်ခံစာများသာရှိသည်။ Carnes, 1991; Carnes et al ။ , 2004; Carnes, Murray, & Charpentier, 2005), ဤအစီရင်ခံစာများသည်အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းထက်အခြားစွဲလမ်းမှုများကို workaholism နှင့်ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ နဂိုကတည်းကရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကို အခြေခံ၍ လုပ်သားအင်အား ၂၀% သည်အခြားအပြုအမူများကိုစွဲလမ်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းကြသည်။
စျေးဝယ်ရန်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုမှာ ၁၀.၇% ရှိခဲ့သည် ကွတ်၏ (1987) ကောလိပ်နမူနာနှင့်အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်ကလူငယ်များကြားတွင် ၁၂% မှ ၂၁.၈% ကြားတွင်ထားခဲ့သည် (ဥပမာ၊ ကြည့်ပါ) Dittmar၊ ၂၀၀၅; MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀ခန့်မှန်းချက်အများစုသည်အရွယ်ရောက်သူများတွင် ၁% မှ ၆% အထိရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။Faber & O'Guinn, 1992; Freimuth et al ။ , 2008). ကိုရမ်၊ Faber၊ Aboujaoude၊ Large နှင့် Serpe (၂၀၀၆) US အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေအတွက်စျေး ၀ ယ်ခြင်းစွဲလမ်းမှု၏ကျပန်းနမူနာတယ်လီဖုန်းသုံးစွဲမှုနှုန်းကိုခန့်မှန်းn = 2,513) 5.8% ၏။ Neuner, Raab နှင့် Reisch (၂၀၀၅) ဂျာမန်အရွယ်ရောက်သူများ၏ကိုယ်စားပြုပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။n 974% ၏ = 2001 ခုနှစ်တွင် 7.6) ။ လေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ စျေးဝယ်စွဲမှုကိုခံစားနေရသောအမေရိကန်လူကြီး ၆ ရာခိုင်နှုန်းပျံ့နှံ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခန့်မှန်းကြသည် ကိုရမ်ကျမ်း et al ။ (2006).
စျေးဝယ်စွဲသူများအနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်သေးငယ်သောနမူနာများတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှု ၂၁% မှ ၄၆% အထိရှိသည်။အနက်ရောင်, 2007) နှင့် bulimia nervosa နှင့်အရက်သောက်စားခြင်းပျံ့နှံ့မှုသည် ၈% မှ ၃၅% အထိရှိသည်။အနက်ရောင်, 2007; Freimuth et al ။ , 2008) ။ အသေးစားနမူနာနှစ်ခုစစ်တမ်းများ (n = 24 နှင့် 19) အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူသူ၏ 46-47% ကိုလည်းအရက် (အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအောက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသော), 17% နှင့် 5% အသီးသီး BED ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြသည် (အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကိုပြသ (၈) ရာနှုန်းသည်လောင်းကစားသမားများဖြစ်သည်။Faber et al ။ , 1995; Mitchell က et al ။ , 2002 [လောင်းကစားဝိုင်းဆန်းစစ်ခဲ့ပါဘူး] ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားစွဲလမ်းမှု (၁၀) မျိုးနှင့်အတူစျေးဝယ်စွဲခြင်း၏တွဲဖက်မှုသည် ၂၀% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
အထက်ပါပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပေါ် မူတည်၍ အမေရိကန်လူကြီးများအကြားစွဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ ၁၁ ခု၏နောက်ဆုံး ၁၂ လအတွင်းပျံ့နှံ့မှုမှာစီးကရက် - ၁၅%၊ အရက် - ၁၀% - မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု - ၅%၊ အစာစားခြင်း - ၂%၊ လောင်းကစားခြင်း - ဖြစ်သည်။ ၂%၊ အင်တာနက် ၂%၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ၃%၊ လိင် - ၃%၊ လေ့ကျင့်ခန်း - ၃%၊ အလုပ် - ၁၀% နှင့်စျေး ၀ ယ် - ၆% ။ သာအစီရင်ခံ 12 အကြီးစားလေ့လာမှုများ၏ 11 စားပွဲတင်2သတ်သတ်မှတ်မှတ် Co- စွဲအပေါ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာသားထဲတွင်အသေးစားလေ့လာမှုများကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်းစွဲ Co- ဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခု matrix ကို, ဤဒေတာများမှခန့်မှန်းထားသည်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် စားပွဲတင် 3။ ဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုစလုံးကိုကြည့်။ သူတို့၏တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက် ၃ ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာစွဲလမ်းမှုတွင်ထပ်တူကျမှုမရှိဟုယူဆနိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင်တစ် ဦး တစ်ယောက်သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုကိုရိုးရိုးလေးသာထည့်သွင်းပြီးစွဲလမ်းမှု၏စုစုပေါင်းရာခိုင်နှုန်းသည် ၆၁% အထိတိုးလာလိမ့်မည်။ ရှင်းနေသည်မှာပူးတွဲစွဲချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အစီရင်ခံခဲ့ကြသောကြောင့်ဤယူဆချက်သည်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုတွင်“ လုံးဝထပ်နေသည်” ဟုယူဆနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုလုံးမှတူညီသောလူများခံစားခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်မှန်ခဲ့ပါကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုခံစားနေရသောစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုစလုံးကို ၁၀၀% ထပ်နေသည်နှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ဟုအစီရင်ခံလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၁၀၀% ထပ်တူကျပါကခြုံငုံပျံ့နှံ့မှုသည်လူ ဦး ရေ၏ ၁၅% ခန့်တွင်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပျံ့နှံ့စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးအတွက်မဆိုတွဲဖက်မှုဖြစ်ပွားမှုပျမ်းမျှ ၂၃.၄၂% (အကွာအဝေး = ၁၀-၅၀%)၊ စားပွဲတင်3(ဒါ့အပြင်ဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ Essau၊ ၂၀၀၈).
တတိယအချက်အနေနှင့်တစ်ခုတည်းသောအပြုအမူများကိုစွဲလမ်းနေသူများနှင့်အမူအကျင့်နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုပြီးစွဲလမ်းနေသူများရှိသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ဤယူဆချက်သည်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုထပ်ခါထပ်ခါထပ်နေခြင်းနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါစွဲစွဲလမ်းနေသည့်အပြုအမူများကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သျောလညျးတစျခုခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးစေနိုင်သည် ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအားစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတစ်ခုစီ၏ပျံ့နှံ့မှုမှပျမ်းမျှပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု (၂၃.၄၂%) ကိုဖယ်ရှားပြီးကျန်ရှိသော“ ထူးခြားသောကှဲလှဲ” ကိုကောက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ဒါက ၄၆.၇၁% နဲ့ညီတယ်။ ထိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည် (၆၁%)၊ စုစုပေါင်း၏ ၂၃.၄၂% (ဆိုလိုသည်မှာ ၆၁% - [၆၁% × ၂၃.၄၂%]) ဖြစ်သည့်စုစုပေါင်းပျံ့နှံ့မှုမှနှုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေ၏ ၄၇% သည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုခံစားနေရသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အချို့သောရာခိုင်နှုန်း (ဥပမာ ၂၅%) သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စွဲလမ်းမှုခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြသည့် algorithm ကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်၎င်းသည်အချို့သောရာခိုင်နှုန်း (ဥပမာ ၅၀%) သည်တတိယအစွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံစားကြရလိမ့်မည်။ အပိုဆောင်းပူးတွဲစွဲကိန်းကွဲမှုကိုကန ဦး အစီရင်ခံတင်ပြသည့်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုအတွင်းမှဖယ်ထုတ်နိုင်သည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တတိယစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူသည်ခြွင်းချက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ Regier et al ။ , 1990) ။ ထို့ကြောင့်, တစ် ဦး စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ခြုံငုံပျံ့နှံ့အတွက်အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းကျဆင်းခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
တတိယယူဆချက်မှရရှိသောဒုတိယခန့်မှန်းချက်အရလူအများစုတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတစ်ခု၊ လူကြိုက်အများဆုံးစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှအပလူအများစုတွင်စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးမခံစားရဟုငြင်းခုံမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်စီးကရက်ဆေးလိပ်အသုံးပြုမှုကိုစာရင်းမှဖယ်ထုတ်ပြီးအခြားစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအားလုံးနှင့်အတူတွဲဖက်သည်ဟုယူဆလျှင်လူ ဦး ရေ၏ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ (ဥပမာ - ၆၁% မှ ၁၅%) ခံစားနေရသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
တတိယယူဆချက်မှရရှိသောတတိယခန့်မှန်းချက်အရအခြားသူများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ထို့နောက်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုစီမှကျန်ရှိသော ၂၅% ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်၊ ရှေးရိုးစွဲရာခိုင်နှုန်း။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လူ ဦး ရေ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၄.၅% (ဆိုလိုသည်မှာ ၄၆% မှ [၄၆% × ၂၅%]) သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ တတိယယူဆချက်မှရရှိသောဒုတိယနှင့်တတိယခန့်မှန်းချက်များသည်အလွန်အကျွံရှေးရိုးစွဲဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အရက်သုံးစွဲခြင်း၊ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းတို့နှင့်အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော်အခြားအပြုအမူများမဟုတ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအကြားစုစုပေါင်း nonoverlap၊ total overlap သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်နေသည်ဒေတာအကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီပုံရသည်။ ဒီမော်ဒယ်အတွင်းမှာပဲ၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆေးစွဲမှုနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်း၊ အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုစွဲလမ်းမှုသည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ထပ်တူကျခြင်းသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ ရှေးရိုးစွဲမော်ဒယ်လ်အဖြစ်ယူဆထားသည့်အပို ၂၅% ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ လုပ်နိုင်သည့်အခြားခန့်မှန်းချက်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အခြားခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုအမြင့်ဆုံး (၅၀%) ကိုစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူတစ်ခုမှတစ်ခုချင်းစီကိုဖယ်ထုတ်သင့်သည်၊ အလွန်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်မှထွက်ပေါ်လာရန်ဟူသောအခိုင်အမာမှပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည် စွဲသူများသည်“ ခက်ခဲသောကြိုးများ” ကိုစွဲလမ်းသူများဖြစ်သဖြင့်သူတို့သည်များစွာသောစွဲလမ်းမှုဒဏ်ကိုခံစားရမည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၃၀.၅% သာလျှင် ၅၀% ကိုဖယ်ရှားလျှင်အနည်းဆုံးစွဲလမ်းစေသောရောဂါတစ်ခုခံစားရမည်ဟုခန့်မှန်းရသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ၆၁% - [၆၁% × ၅၀%]) ။
ဤကွဲပြားခြားနားသော algorithms များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများအားလုံးကိုစုစည်းဖော်ပြသောစုစုပေါင်းပျံ့နှံ့မှုကိုယူပြီးထိုပေါင်းလဒ်မှနုတ်ယူခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခု၏ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုသည်ဖော်ပြသောပုံစံကိုအကောင်းဆုံးထင်ဟပ်သည်ဟုယုံကြည်သည် စားပွဲတင် 3။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏ ၄၇% သည် ၁၂ လအတွင်းဤစွဲလမ်းမှု ၁၁ ခုအနက် ၁ ခုမှဝေဒနာခံစားနေရသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့တွင်စာပေတွင်ဖော်ပြသည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သောအပြုအမူ (၁၁) ခု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပွားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်စွဲလမ်းမှုသည်လူ ဦး ရေ၏လူနည်းစုပါ ၀ င်သော ၂-၃% ခန့်တွင်ရှိသည်။ အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ အလုပ်နှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းစသည်တို့သည်လူ ဦး ရေ၏ ၅ မှ ၁၅% ခန့်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူများသည်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဘာကြောင့်ကွာခြားရကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ အတော်လေးချက်ချင်းဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (လျင်မြန်သောဘဏ္lossာရေးဆုံးရှုံးမှု၊ လူမှုရေးငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခြင်းမှဒဏ်ရာများ) ပါ ၀ င်သည့်စွဲလမ်းမှုသည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကန့်သတ်မထားခြင်း (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းမှရာထူးတိုးခြင်းမခံရသည့်အပြုအမူများ (အနည်းဆုံးချက်ချင်းဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခြင်း) သည်အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဤရှုထောင့်သည်အချက်အလက်များကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီပုံရသည် (ဥပမာအချို့နေရာများတွင်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သုံးစွဲခြင်း၊ အလုပ်နှင့်စျေးဝယ်ခြင်းတို့သည်လူမှုရေးအရလက်ခံမှုရှိသည်) နှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏ကြီးမားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်လူကြိုက်များသောအသုံးအနှုန်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုအကြံပြုသည်။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏သတင်းပို့) ။
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်သောဝါဒီအနည်းငယ်ခန့်မှန်းချက်အလွန်မြင့်မားသည်ဟူသောအချက်သည်အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်ရှိသူများသည်အနည်းဆုံးတစ်ရက် ၈ နာရီအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားကြသောကြောင့်အံ့သြစရာတော့မရှိပါ။ အလုပ်စွဲလန်းသူများအတွက်ငွေရှာဖွေရန်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ရမည်ဟူသောအချက်သည်လူအများစု (မယားများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) ထံမှဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်တစ်မိသားစုဘဝအတွက် In-depth ပါဝင်မှုတားဆီးပေမည်ပေမယ့်။ “ ကုန်ကျစရိတ်” များသောအလုပ်များအားသဘောတရားဖန်တီးမှုသည်လူမှုပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေတွင်ရှုပ်ထွေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂရစ်ဖစ် (2005b) တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်တစ်ရက်လျှင် ၁၆ နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းရလဒ်အနေဖြင့်သူ၏ဘ ၀ တွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပြီး (ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောဘဏ္reာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်သည့်) တာဝန်ဝတ္တရားမရှိသည့်အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ၏ဥပမာကိုကိုးကားထားသည်။ သို့သော်ကလေး ၃ ယောက်နှင့်လက်ထပ်ထားသည့်အသက်အရွယ်ကြီးသောအမျိုးသားတစ် ဦး သည်နေ့စဉ် ၁၆ ​​နာရီအလုပ်လုပ်သော်လည်းသူ၏ဘ ၀ တွင်ပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာများ (ဥပမာ - ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ) ရှိနိုင်သည်။ ဤအထီးနှစ်ခုသည်တူညီသောအလုပ်အပြုအမူများတွင်ပါဝင်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသာပြoneနာရှိသည်နှင့် / သို့မဟုတ်စွဲနိုင်သည်။
လှုပ်ရှားမှုသုံးစွဲသူမည်မျှလက်လှမ်းသည်ကဲ့သို့သောအချက်များအပါအဝင်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြနိုင်သောအခြားအကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နေသည့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအများစုကိုလူအများကအလွန်အမင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။ ၏အချိန်မှာသိသာဥပမာအဖြစ် ကွတ်၏ (1987) လေ့လာမှု၊ အင်တာနက်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာပြီ၊ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ လူတွေဟာသူတို့မရရှိနိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုစွဲလမ်းနေလို့မရပါဘူး။ အင်တာနက်သည်ယေဘုယျအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေအကြားအဓိကဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအင်တာနက်စွဲလမ်းသူရာခိုင်နှုန်းသည်များပြားလာလိမ့်မည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူမျိုးစုံတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဘဏ္costာရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုတောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်လောင်းကစားရုံတစ်ခုတွင်အချိန်များစွာကုန်လွန်လေ့ရှိသောလောင်းကစားသမားတစ် ဦး အတွက်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်အများစုသည်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူကိုထိန်းသိမ်းရန်သွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အကျင့်စွဲလောင်းကစားသူသည်လောင်းကစားရုံမှထွက်ခွာရန်နှင့်စျေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်၊ အလုပ်ခွင်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပါ ၀ င်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသည်ဆေးလိပ်နှင့်အရက်စွဲခြင်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလည်းသည်းခံနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များ / အမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူတကွဖြစ်ပွားမှုများဖြစ်လေ့ရှိခြင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အပန်းဖြေချိန်များအပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဇာတ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးထားသောပြissuesနာများကိုပိုမိုတိကျစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်တူညီသောကြီးမားသောနမူနာများအတွင်းစွဲလမ်းနေသည့်အပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုပုံစံအားလုံးကိုအကဲဖြတ်ရန်သုတေသနများစွာလိုအပ်သည်။ လူသိများသည့်အရာအားဖြင့်အတွဲ ၁၁၀ ကို ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထပ်တူတွဲဖက်ခြင်းအားဖယ်ရှားခြင်းမှရရှိသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခန့်မှန်းချက်အရအမေရိကန်လူကြီး ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ၁၂ လအတွင်းစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည် ကာလ။
စွဲလမ်းမှုသည်အလွန်အမင်းပျံ့နှံ့နိုင်သည်ဟုသိလိုသည်။ တစ် ဦး စွဲဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြီးမားတဲ့အမည်းစက်ရှိပါတယ် (Leshner, 1997); မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်လူဆိုးများ၊ အလိုအလျောက်အားနည်းသော၊ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း၊Sussman & Ames, 2008) ။ အမည်းစက်ရှုထောင့်ကတိကျပြီးလက်ရှိလေ့လာမှုတွင်တွက်ချက်ထားသည့်ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်များမှန်ကန်လျှင်အမေရိကန်လူကြီးတစ်ဝက်နီးပါးသည်“ လူဆိုးများ” ဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ လူများသည်ထိုယေဘူယျအားယုံကြည်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမရှင်းလင်းပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာစွဲစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်း၏အထွေထွေအသိပညာပေးခြင်းသည်အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောအမည်းစက်ကိုလျှော့ချနိုင်သည် (အနိမ့်ပျံ့နှံ့မှု၏ယူဆချက်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အခြေခံပြီးအမည်းစက်ကိုကြိုတင်မြင်ထားသည်ဟုယူဆသည်) ။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်လူမှုရေးပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုသည်“ စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ဘဲအချို့သောအစွန်းရောက်စွဲလမ်းမှု (ဥပမာ - နာရီပေါင်းများစွာရေချိုးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှု၏ခံယူချက်အပေါ်ပိုမိုသုတေသနလိုအပ်သည်
လက်ရှိအချိန်တွင်ကျွမ်းကျင်သူအများစုကဆေးစွဲခြင်းသည်နာတာရှည်ရောဂါပြန်ဖြစ်သည့်ရောဂါဟုယူမှတ်ကြသည်။ Leshner, 1997; Sussman & Ames, 2008), ဥပမာသွေးတိုးရောဂါသို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအဖြစ်အခြားနာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ဆင်တူ (O'Brien & McLellan, 1996) ။ ထို့ကြောင့်၊ စွဲသည်အလွန်အဖြစ်များသည့်ရောဂါကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ် (တုပ်ကွေးအမျိုးအစားအချို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်း) ဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုနှုန်းဖြင့်စွဲခြင်းသည်အခြားသို့မဟုတ်နောက်ထပ် (မျိုးစုံ) ဖြစ်ရပ်များကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိခွဲခြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စွဲ (စ) သည်လူမှုရေး - ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများဖြင့်ပုံစံပြုထားသောလူနေမှုပုံစံစသည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည် (Sussman & Ames, 2008), ဖြစ်နိုင်သည်တ ဦး တည်းကဒီလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပုံနှိပ်ဖို့အများဆုံးအားနည်းချက်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလနှင့်အတူ (Volkow & ပညာရှိ, 2005) ။ လူမှုရေးအခြေအနေများ၊ အချိန်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အခြားလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအင်အားစုများအနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုအားသားကောင်များကလူသိများလာလျှင်စွဲလမ်းမှုအရာဝတ္ထုများတွင်ကွဲပြားမှုများရှိပါက၎င်းသည်အလွန်အကျွံအပြုအမူများကိုတားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်လမ်းလွဲစေနိုင်သည်။ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မိမိကိုယ်ကိုပျက်စီးစေသည့်ရလဒ်များနှင့်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်သောလမ်းညွှန်ချက်များတွင်အပြုအမူလမ်းကြောင်းများမှ (ကြည့်ရှုပါ) Griffiths က, 2009b; Marks, 1990; Orford, 2001; Schaef, 1987).
နောက်ထပ်ယူ လာကင်၊ ဝုဒ်နှင့်ဂရစ်ဖစ်တို့ (၂၀၀၆) ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်အထူးသဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်နေခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖော်ထုတ်ခံရခြင်းများသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရသောလူများအား“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းမပြုရန်သတိပြုရမည်။ အဖြစ် လာကင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (၂၀၀၆) သတိပြုရန်မှာလူတို့သည်မိမိတို့၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆက်နွယ်မှုနှင့်ဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေမရှိလျှင်၎င်းသည်ရောဂါလက္ခဏာကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးခံစားနေရသည်ဟုဖော်ပြခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြီးမမျှတပါ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ “ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောလူတစ် ဦး ၏အမြင်မည်သို့ပင်ရှိပါစေဤဆောင်းပါးတွင်တင်ပြထားသောအပြုအမူ (၁၁) ခုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါက ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများအထူးသဖြင့် mesolimbic dopaminergic (ဆုလာဘ်) စနစ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။Leshner, 1997; Sussman & Ames, 2008) ။ ဤအပြောင်းအလဲများသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူအားရပ်တန့်ရန်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်စွဲလမ်းမှုသည်များသောအားဖြင့်အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုစုဆောင်းစေသည်။Sussman & Ames, 2008) ။ တောင်မှဒါခေါ်အပြုသဘောစွဲ (မျက်မှန်၊ ၁၉၇၆; Griffiths က, 1996) စွဲလမ်းအတွက်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည် ဘရောင်း, 1993, "ရောနှောကောင်းကြီးမင်္ဂလာ" ပေါ်တွင်) ။ ဤသည်ဥပမာအားဖြင့်, workaholism ကနေ burnout ပါဝင်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကပစ်မှတ်ထားရန်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာဆိုးရွားသည့်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုသိရှိထားသည့်တိုင်အချို့သောအပြုအမူများကိုထပ်ခါတလဲလဲရှာဖွေရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဤသည်မသင်မနေရ neurobiological အပြောင်းအလဲများ, ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ (ဥပမာ, ပုဂ္ဂလဒိrest္နာမငြိမ်ခြင်း၏စိတ်သဘော, သိစိတ်ကိုမကျေနပ်မှု) နှင့်အပြုအမူ၏လူမှုရေးလွယ်ကူချောမွေ့၏ function ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့လူများကအဘယ်ကြောင့်အလွယ်တကူထွက်ခွာသွားပြီးအခြားသူများကမလုပ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်အနာဂတ်သုတေသနနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်လွယ်ကူခြင်းကွာခြားချက်များသည်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လူမှုရေးအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဆွေမျိုးသြဇာသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သေချာသည်မှာရောဂါတံဆိပ်တစ်ခုကကုသမှုကိုသနားခြင်းကရုဏာသက်စေနိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုသည် heuristic function ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။Sussman & Ames, 2008)
ဒီလေ့လာမှုမှာကြိုးစားခဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူမြောက်မြားစွာကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ (ဥပမာ၊ ချစ်ခြင်း၊ လိင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အလုပ်များနှင့်စျေးဝယ်ခြင်း) ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်နည်းပါးသည်။ ကြီးမားသောနမူနာများနှင့်အတူဤအပြုအမူများအပေါ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအနည်းငယ်သာလေ့လာမှုများသည်နမူနာတစ်ခုတည်းတွင်အမျိုးမျိုးသောစွဲလမ်းမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီအမျိုးအစား၏နောက်ထပ်အလုပ်အလင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချက်တစ်ချက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုတစ်ခုအရအချို့သောဥပဒေရေးရာစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်တူညီသောအချက် (အလုပ်၊ အစာစားခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်း) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အများအားဖြင့်တရားဝင်) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အတော်အတန်ပြင်းထန်သောအပြုအမူများကိုထင်ဟပ်စေသည့်တတိယအချက်အပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (MacLaren & အကောင်းဆုံး၊ ၂၀၁၀) ။ တူညီသောနမူနာတစ်ခုတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူပုံစံများကိုဆန်းစစ်သည့်ထပ်ဆင့်သုတေသနပြုမှုသည်အမျိုးမျိုးသောသက်ဆိုင်သူများအသိုင်းအဝိုင်းများ (စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများနယ်ပယ်ရှိသုတေသီများနှင့်လေ့ကျင့်သူများအပါအ ၀ င်) အားအခြေခံအကြောင်းတရားများနှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်ပျက်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ဤအပြုအမူများကိုအကောင်းဆုံးဆက်ဆံပါ။
တတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုသည်ပါဝင်မှုစံနှုန်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သာဓကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လောင်းကစားအလွှာအတော်များများကို ("ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း") ကိုလောင်းကစားစွဲသူများဟုမှတ်ယူသူများကိုသာစဉ်းစားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တသမတ်တည်းအစွန်းရောက် "ပြproblemနာလောင်းကစား" ထည့်သွင်းခဲ့ (Lesieur et al ။ , 1991), လောင်းကစားဝိုင်း၏ပျံ့နှံ့နှစ်ဆနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်အတူထပ်တူသာ။ ကြီးမြတ်ပါပြီလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနယ်ပယ်အတွင်းအခြားဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနတွင်ယေဘုယျလူ ဦး ရေနမူနာများကိုသာထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပေါ်သုတေသနပြုချက်အများစုကိုလူ ဦး ရေလေ့လာမှုများအပေါ်မဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူနမူနာများကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းမှာမြင့်တက်လေ့ရှိသည်။ တတိယသာဓကအနေနှင့်သုတေသီအချို့သည်လိင်မှုစွဲခြင်းကိုအကျိုးဆက်များစံနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ပတ်လျှင် orgasms အရေအတွက်အဖြစ်ဖော်ပြပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များအကြားဆက်နွယ်မှုမှာမရှင်းလင်းပေ။Kaplan & Krueger, 2010) ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ခန့်ခံစားနေရသည်ဟုသတ်မှတ်ပါကပျံ့နှံ့နှုန်းမှာ ၅ မှ ၇% အထိမြင့်မားလိမ့်မည်။ စတုတ္ထမြောက်ဥပမာအနေနှင့်လေ့လာမှုအများစုသည်ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာကာလကိုအာရုံစိုက်ပြီး၊ DSM မော်ဒယ်, အချိန်ဘောင်နှင့်အမှတ်ပေးစံအချို့ကိုအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည် (ကြည့်ပါ စားပွဲတင် 2) ။ ဆေးစွဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပါ ၀ င်မှုစံနှုန်းများကိုစဉ်းစားသောအခါ ပိုမို၍ ဆူညံသံတိုးစေသည်။ ပဉ္စမဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမေရိကန်လူကြီးတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခြားနိုင်ငံများသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းတွင်ရလဒ်အချို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည် (ဥပမာ၊ အချို့သောဥရောပနိုင်ငံများရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှု)
စတုတ္ထအနေဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်“ အစားထိုးစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအယူအဆကိုမလေ့လာပါ ပြန်လည်နေရာချထားရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအထူးကုများကအစားထိုးစွဲလမ်း၏အယူအဆကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။Chiauzzi၊ ၁၉၉၁; Gorski & Miller က, 1986; Horvath, 1999, 2006; Murphy & Hoffman, 1993; Sussman & Black က, 2008) ။ ဤအယူအဆသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုရည်ညွှန်းပြီး၊ အခြားစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအားဖြင့်ယခင်ကရရှိခဲ့သည့်အနည်းဆုံးသော့ချက်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအားတာဝန်ထမ်းဆောင်စေပြီး၊ ဤစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အစားထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စွဲနှစ်မျိုးလုံးသည် ၁၂ လတာကာလအတွင်းစေ့စပ်ထားခြင်းမရှိပါက၎င်းတို့သည်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောစွဲလမ်းမှုများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပဉ္စမအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်စွဲလမ်းမှု၏“ အရာဝတ္ထု” ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်သူတစ် ဦး ချင်းအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည့်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသိနိုင်ပါ။ ဥပမာ, ဂရစ်ဖစ် (၂၀၀၀) စွဲလမ်းမှုကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်ကြောင်းစောဒကတက်သည် သို့ အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်စှဲ on အင်တာနက် (ဥပမာ၊ လောင်းကစား၊ ကွန်ပျူတာကစားခြင်း၊ ချစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်) ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချို့သောအပြုအမူများ (ဥပမာ၊ ဆိုက်ဘာဆက်စ်၊ ဆိုက်ဘာစတာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစကားပြောခြင်း) သည်ထိုသူအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်သာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အပြုအမူများဖြစ်နိုင်သည်၊ နှင့်ပိုးသတ်ဆေး (Griffiths က, 2000a, 2000b; လူငယ်တို့, 1996).
ဆ္ဌမအချက်အနေဖြင့်စွဲလမ်းမှုအားပူးတွဲဖြစ်ပွားခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်“ ထူးခြားသော” နှင့်“ မျှဝေ” သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမဖော်ထုတ်ပါ။ အနာဂတ်သုတေသနသည်လူအချို့အနေဖြင့်စွဲလမ်းနေသည့်အပြုအမူတစ်ခုမှဘာကြောင့်ခံရနိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြားလူတစ် ဦး သည်အဘယ်ကြောင့်ဆေးစွဲမှုအမြောက်အများကိုခံစားရလေ့ရှိကြောင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ (ဥပမာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါခံစားနေရသူများကြားတွင်ဖြစ်တတ်သော၊ Bagby, Vachon, Bulmash, & Quilty, 2008) ။ ထို့အပြင်ဥပမာအားဖြင့်လူအများစုသည်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်လောင်းကစားတွင်စွဲစွဲလမ်းနေခြင်းဖြစ်သော်လည်းအချက်အချာကျသောဥယျာဉ်ခြံဥယျာဉ်တွင်စွဲလမ်းမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ရွေးချယ်ထားသောစွဲလမ်းမှုများကိုအဆင်ပြေစေရန်နမူနာကောက်ယူသည်ဟုစွပ်စွဲနိုင်သည်။ တူညီသောလူများကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့နိုင်သည်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိူင်သည့်ထိုကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သောအပြုအမူများလည်းရှိသည်။ စွဲလမ်းစေသည်ဟုယူဆကြသောအခြားအပြုအမူများမှာကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်သည် (ကွတ်, 1987ဘာသာ၊Sussman & Black က, 2008; တေလာ, 2002), အော့ဖ်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများ (Fisher သည် 1994 [၁၁၇ မှ ၁၆ နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်လူငယ် ၄၆၇ ဦး အနက် ၆% သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများဖြစ်သည်။ Griffiths & Meredith, 2009), compulsive အရေပြားကောက်သို့မဟုတ်ဆံပင်ဆွဲ (ဥပမာ trichotillomania; ဘရူ & Potenza, 2008; Marks, 1990) kleptomania (ကွတ်, 1987; Marks, 1990), မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းအသုံးပြုမှု (Bianchi & Phillips, 2005picaလာစီ, 1990နေလောင်ခြင်း၊Poorsattar & Hornung, 2010) နှင့်ပင်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ (Sussman & Ames, 2008) ဒါမှမဟုတ်ကားတွေခိုးတာ၊Kellett & စုစုပေါင်း, 2006) ။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၏တိကျသောအရာဝတ္ထုများကိုအခြေခံသောစွဲလမ်းစေသောဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုနားလည်ရန် ဦး တည်နိုင်သည်။
အားနည်းချက်ရှိသောလူတစ် ဦး ချင်းစီသည် ပိုမို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောပုဂ္ဂလဒိstate္ဌာန်ရရှိရန်အတွက်၎င်းတို့၏ neurobiological circuit ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်အရက်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းစသည့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုဖွယ်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏အနည်းဆုံးလူနည်းစုသည်အချိန်မရွေးစွဲလမ်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်ဟုအခိုင်အမာပြောခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းလူနည်းစုလူနည်းစုအကြားအချို့သောစွဲလမ်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကစွဲလမ်းမှုသည်လူတစ် ဦး အနေဖြင့်သဘာဝအခြေအနေများဖြစ်သည်။ အဖြစ် အမှတ် (၁၉၉၀) “ ဘဝသည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့သေသည်” ဟုဒေါသတကြီးအကြံပြုခဲ့သည် (စ။ ၁၃၈၉) ။ ရှင်းနေသည်မှာဤနယ်ပယ်တွင်သုတေသနများစွာလိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့စွဲသည်တစ် ဦး ချင်းအာရုံကြောဓာတုဗေဒ၏ဘဝပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
စာရေးသူ (များ) သည်ဤဆောင်းပါး၏သုတေသနနှင့် / သို့မဟုတ်ရေးသားခြင်းအတွက်အောက်ပါဘဏ္supportာရေးအထောက်အပံ့ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည် - မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (# sDA020138)
စာရေးသူ (များ) သည်ဤဆောင်းပါး၏ရေးသားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခမရှိဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Aboujaoude အီး၊ ကိုရမ် LM၊ Gamel N၊ အကြီးစား MD၊ Serpe RT ။ ပြproblemနာများအင်တာနက်အသုံးပြုရန်အလားအလာရှိသောအမှတ်အသားများ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၂၅၁၃ ယောက်ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။ CNS Spectrums 2,513; 2006: 11-750 ။ [PubMed]
လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုနားလည်ခြင်းအဒမ်ဂျေ။ ခေတ်ပြိုင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2009; 39: 231-240 ။
Agrawal A၊ Neale MC၊ Prescott CA၊ Kendler KS ။ ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ - ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှု။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 2004; 34: 217-228 ။ [PubMed]
Albrecht U, Kirschner NE, Grusser SM ။ အမူအကျင့်စွဲများအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးတူရိယာများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ GMS စိတ် - လူမှု - ဆေးပညာ။ 2007; 4: 11 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Allegre B, Souville M, Therme P, Griffiths အမ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုအတိုင်းအတာ။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2006; 14: 631-646 ။
Allison KC, Grilo CM, Masheb RM, Stunkard AJ ။ မူးရူးအစာစားခြင်းရောဂါနှင့်ညဘက်အစာစားခြင်းလက္ခဏာ - ပုံမှန်မဟုတ်သောအစားအစာကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2005; 73: 1107-1115 ။ [PubMed]
Anderson KJ ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 2001; 80: 21-26 ။ [PubMed]
Bagby RM, Vachon DD, Bulmash E, Quilty LC ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2008; 22: 191-207 ။ [PubMed]
Bakken IJ, Wenzel HG, Gotestam KG, Johansson A, Oren A. နော်ဝေအရွယ်ရောက်သူများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - stratified ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာလေ့လာမှု။ စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်။ 2009; 50: 121-127 ။ [PubMed]
Bamber D၊ Cockerill IM, Carroll D. လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှု၏ရောဂါဗေဒအခြေအနေ။ အားကစားဆေးပညာ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2000; 34: 125-132 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barnes GM, Welte JW, Hoffman JH, Tidwell M-CQ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူငယ်များအကြားလောင်းကစားခြင်း၊ အရက်နှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2009; 70: 134-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Becona အီး Galicia (စပိန်) လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်တွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ပျံ့နှံ့မှု။ 1993; 9: 353-369 ။
Bernardi S, Pallanti အက်စ်အင်တာနက်စွဲ: comorbidities နှင့် dissociative လက္ခဏာတွေအာရုံစိုက်တစ် ဦး ကဖော်ပြရန်လက်တွေ့လေ့လာမှု။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 50: 510-516 ။ [PubMed]
Bianchi A, Phillips က JG ။ ပြproblemနာမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန့်မှန်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2005; 8: 39-51 ။ [PubMed]
အနက်ရောင် DW ။ ဝယ်ယူမှုဝယ်ရောဂါ၏တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ ကမ္ဘာ့စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 6: 14-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Black DW, Kehrberg LL, Flumerfelt DL, Schlosser SS ။ compulsive လိင်အပြုအမူသတင်းပို့ 36 ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1997; 154: 243-249 ။ [PubMed]
Black DW, Moyer T. လက်တွေ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအပြုအမူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ။ 1998; 49: 1434-1439 ။ [PubMed]
Bondolfi G, Osiek C, Ferrero F. Prevalence သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှု။ Acta Pscyhiatrica Scandinavica ။ 2000; 101: 473-475 ။ [PubMed]
Brandon TH, Vidrine JI, Litvin EB ။ relapse နှင့် relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2007; 3: 257-284 ။ [PubMed]
Brenner V. ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုစိတ်ပညာ: XLVII ။ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအချက်များ - အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစစ်တမ်း၏ပထမရက် ၉၀ ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ။ 90; 1997: 80-879 ​​။ [PubMed]
ဘရူဂျေအေ, Potenza MN ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါများ၏မျိုးရိုးဗီဇ - မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆေးဝါးဗေဒ။ 2008; 75: 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရောင်း RIF ။ လောင်းကစားခြင်း၏လေ့လာမှုအချို့ကိုအခြားစွဲလမ်းမှုများ၏လေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ In: Eadington WR၊ Cornelius J၊ အယ်ဒီတာများ။ လောင်းကစားအပြုအမူနှင့်လောင်းကစားပြproblemနာ။ Reno: နီဗာဒါစာနယ်ဇင်း၊ 1993 စစ။ 341-372 ။
Burke က RJ ။ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း Workaholism: ကျား, မကွဲပြားမှု။ လိင်ကဏ္olesများ။ 1999; 41: 333-345 ။
Burke က RJ ။ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း Workaholism: အယူအဆများ, ရလဒ်များနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ စီမံခန့်ခွဲမှုသုံးသပ်ချက်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2000; 2: 1-16 ။
Cao F, Su L. သည်တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်များကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ ကလေး - စောင့်ရှောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ 2006; 33: 275-281 ။ [PubMed]
Carnes P. “ အချစ်” ဟုမခေါ်ပါနှင့်။ လိင်စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း။ နယူးယောက်၊ NY: Bantam; 1991 ။
Carnes PJ, Murray RE, Charpentier L. စွဲအပြန်အလှန်ရောဂါ။ In: Coombs RH၊ အယ်ဒီတာ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါ၏လက်စွဲစာအုပ် - ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန်။ နယူးယောက်၊ NY: John Wiley; 2004 စစ။ 31-62 ။
Castro-Fornieles J, Diaz R, Goti J, Calvo R, Gonzalez L, Serrano L, Gual A. ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များအကြားပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ။ ဥရောပစွဲသုတေသန။ 2010; 16: 61-68 ။ [PubMed]
Chen K, Sheth AJ, Elliott DK, Yeager A. အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများအတွက်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လူထုနမူနာတွင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2004; 29: 413-423 ။ [PubMed]
Chiauzzi အီးဂျီ။ အဆိုပါစွဲအတွက် relapse ကာကွယ်တားဆီး: တစ် ဦး က biopsychosocial ချဉ်းကပ်နည်း။ Elmsford, NY: Pergamon စာနယ်ဇင်း၊ 1991 ။
Chou C၊ ဆီယို MM ။ အင်တာနက်စွဲစွဲခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဆန္ဒပြည့်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာအတွေ့အကြုံ - ထိုင်ဝမ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အမှု။ ကွန်ပျူတာနှင့်ပညာရေး။ 2000; 35: 65-80 ။
Coffey C၊ Carlin JB၊ Degenhardt L၊ Lynsky M၊ Sanci L, Patton GC ။ လူကြီးများအတွက်ဆေးခြောက်မှီခို: လူ ဦး ရေလေ့လာမှု။ စွဲ။ 2002; 97: 187-194 ။ [PubMed]
Cohen P ကို, Cohen ကို J ကို, Kasen S ကို, Velez CN, Hartmark ကို C, ဂျွန်ဆင် J ကို, Streuning EL ။ နှောင်းပိုင်းကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက် - ငါအတွက်ရောဂါများ၏ epidemiological လေ့လာမှု: အသက်အရွယ်နှင့်ကျား - မတိကျတဲ့ပျံ့နှံ့။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1993; 34: 851-867 ။ [PubMed]
Compton WM, Grant BF, Colliver JD, Glantz MD, Stinson FS ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင် ၁၉၉၁-၁၉၉၂ နှင့် ၂၀၀၁-၂၀၀၂ တွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုမမှန်ခြင်းပျံ့နှံ့ခြင်း။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်။ 1991; 1992: 2001-2002 ။ [PubMed]
Compton WM, သောမတ်စ် YF, Stinson FS, Grant က BF ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ DSM-IV မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုမှု၏ပျံ့နှံ့မှု၊ ဆက်စပ်မှုများ၊ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ - အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2007; 64: 566-576 ။ [PubMed]
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုသူလူ ဦး ရေဆိုင်ရာနားလည်မှုကို Cooper A၊ Morahan-Martin J၊ Mathy RM၊ Maheu M. ဆီသို့ ဦး တည်သည်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 2002; 28: 105-129 ။ [PubMed]
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးပြProbleနာနှင့်လောင်းကစားခြင်းပြProbleနာများ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2000; 16: 347-376 ။ [PubMed]
Desai RA, Desai MM, Potenza MN ။ လောင်းကစားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက် - အမျိုးသားကပ်ရောဂါဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များနှင့်အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2007; 21: 431-440 ။ [PubMed]
Dierker LC, Donny E, Tiffany S, Colby SM, Perrine N, Clayton RR ပထမနှစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားစီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် DSM-IV နီကိုတင်းမှီခိုမှုအကြားဆက်နွယ်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2007; 86: 106-114 ။ [PubMed]
Dittmar အိပ်ချ်။ ကျား၊ မ၊ အသက်နှင့်ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းသူများအဖြစ်အတည်ပြုခြင်း။ စိတ်ပညာ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2005; 96: 467-491 ။ [PubMed]
Doerfler MC, Kammer PP ။ အမျိုးသမီးပညာရှင်များအကြား Workaholism၊ sex နှင့် sex အခန်းကဏ္ping။ လိင်ကဏ္olesများ။ 1986; 14: 551-560 ။
Down DS, Hausenblas HA, Nigg CR ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှီခိုမှုအတိုင်းအတာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအချက်အလက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသိပ္ပံအတွက်တိုင်းတာခြင်း။ 2004; 8: 183-201 ။
Essau CA. စွဲလမ်းစေသောပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်သော: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုသက်ရောက်မှု။ In Essau CA၊ အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စွဲ - ကူးစက်ရောဂါ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: Academic Press; 2008 ခုနှစ်စစ။ 297-313 ။
Essau CA, Hutchinson D. အရက်သုံးစွဲခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု။ In Essau CA၊ အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စွဲ - ကူးစက်ရောဂါ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: Academic Press; 2008 စစ။ 61-115 ။
Estok PJ, Rudy EB ။ အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများပြေးနေခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှု။ သူနာပြု & ကျန်းမာရေးသုတေသန။ 1996; 19: 377-387 ။ [PubMed]
Faber RJ, Christenson GA, De Zwaan M, Mitchell J. ဂျီစားသုံးမှုပုံစံနှစ်မျိုး - မတက်ကြွသောဝယ်ယူမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း။ စားသုံးသူသုတေသနဂျာနယ်။ 1995; 22: 296-304 ။
Faber RJ, O'Guinn TC ။ compulsive ဝယ်ယူများအတွက်လက်တွေ့ Screener ။ စားသုံးသူသုတေသနဂျာနယ်။ 1992; 19: 459-569 ။
Falk DE, Yi H, Hiller-Sturmhofer အက်စ်။ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောအရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုနှင့်ရောဂါများကိုကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ အရက်သုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေး။ 2006; 29: 162-171 ။ [PubMed]
Farrell M, Howes S, Bebbington P, Brugha T, Jenkins R, Lewis G, Meltzer H. နီကိုတင်း၊ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှုနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါအခြေအနေ - အမျိုးသားအိမ်ထောင်စုစစ်တမ်း၏ရလဒ်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ချက်။ 2003; 15: 50-56 ။ [PubMed]
Feigelman W, Wallisch LS, Lesieur HR ။ ပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၊ ပြproblemနာရှိသောပစ္စည်းသုံးစွဲသူများနှင့်ပြdualနာနှစ်မျိုးရှိသည့်လူနာများ - ရောဂါကူးစက်မှုလေ့လာချက်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1998; 88: 467-470 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fisher အက်ဆေးကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲဖော်ထုတ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 1994; 19: 545-553 ။ [PubMed]
Ford JD၊ Gelernter J၊ DeVoe JS, Zhang W, Weiss RD, Brady K, Kranzler HR ။ ကိုကာကိုလာမှီခိုနေရသူတစ် ဦး ဦး အနေဖြင့်ကိုကင်းမှီခိုမှုပြင်းထန်မှုနှင့်ကုသမှုကိုအသုံးချခြင်းနှင့်အတူစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါအခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2009; 99: 193-203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fortson BL, Scotti JR, Chen YC, Malone J, Del Ben KS ။ အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 2007; 56: 137-144 ။ [PubMed]
အပြုအမူစွဲလမ်း: Freimuth M က, Waddell က M, Stannard J ကို, Kelley က S, Kipper တစ် ဦး, ရစ်ချတ်ဆန် A, Szuromi ဗြဲ: dual- ရောဂါနှင့် Co- စွဲ၏နယ်ပယ်တိုးချဲ့။ စွဲ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အုပ်စုများ၏ဂျာနယ်။ 2008; 3: 137-160 ။
ပြင်သစ် MT, Maclean JC, Ettner SL ။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားများ - အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာ၏ပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဆေးနှင့်အရက်ကိုမှီခိုခြင်း။ 2008; 96: 155-164 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gadalla T, Piran N. ကနေဒါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ရောဂါများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးခြင်း။ အမျိုးသားလေ့လာမှု။ အစာစားခြင်းရောဂါများ။ 2007; 15: 189-203 ။ [PubMed]
Garman JF, Hayduk DM, Crider DA, Hodel MM ။ ကောလိပ်တက်သည့်လူ ဦး ရေတွင်လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုပေါ်ပေါက်ခြင်း။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 2004; 52: 221-228 ။ [PubMed]
လူမျိုးခြား DA ။ လူငယ် ၈ မှ ၁၈ အတွင်းလူငယ်များအကြားရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုခြင်း။ အမျိုးသားလေ့လာမှု။ စိတ်ပညာသိပ္ပံ။ 8; 18: 2009-20 ။ [PubMed]
Glasser ဒဗလျူအပြုသဘောဆောင်။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ Harper & Row; 1976 ။
GHaves DH, Carter က JD ။ စွဲအစာစားခြင်း။ In Essau CA၊ အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စွဲ - ကူးစက်ရောဂါ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ 2008 ခုနှစ်စစ။ 179-203 ။
Goodwin RD၊ Keyes KM၊ Hasin DS ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စီးကရက်သုံးစွဲမှုနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုမှုအပြောင်းအလဲများ - ၂၀၀၁-၂၀၀၂ အမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်း၏အထောက်အထား။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2001; 2002: 2009-99 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goossens L, Soenens B, Braet C. မြီးကောင်ပေါက်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာတွင်အရက်အလွန်အကျွံစားခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လက္ခဏာများ။ လက်တွေ့ကလေး & ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2009; 38: 342-353 ။ [PubMed]
Gorski TT, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ Miller ကအမ်လမ်းညွှန်။ လွတ်လပ်ရေး, MO: လွတ်လပ်ရေးစာနယ်ဇင်း; သမ္မာသတိရှိကြလော့တည်းခို 1986 ။
Gotestam KG, Johansson A. နော်ဝေနိုင်ငံတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ DSM-IV အခြေပြုတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးလေ့လာမှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2003; 28: 189-197 ။ [PubMed]
Grant BF၊ Hasin DS၊ Chou P၊ Stinson FS, Dawson DA ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နီကိုတင်းမှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2004; 61: 1107-1115 ။ [PubMed]
Grant က BF, Stinson FS, Dawson DA, Chou P, Dufour MC, Compton W, Kaplan K. ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အတူတကွဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2004; 61: 807-816 ။ [PubMed]
Grant JE, Steinberg MA ။ မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2005; 12: 235-244 ။
Greenfield DN ။ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 1999; 2: 403-412 ။ [PubMed]
Griffin-Shelley အီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးစွဲလမ်းမှု။ လိင်စွဲ & compulsivity ။ 1995; 2: 112-127 ။
Griffiths က MD ။ အပြုအမူစွဲလမ်းမှု - လူတိုင်းအတွက်ပြAnနာလား။ အလုပ်ခွင်သင်ယူ၏ဂျာနယ်။ 1996; 8: 19-25 ။
Griffiths က MD ။ စွဲလေ့ကျင့်ခန်း။ စွဲသုတေသန။ 1997; 5: 161-168 ။
Griffiths က MD ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - အလေးအနက်ထားရမည့်အချိန်လား။ စွဲသုတေသန။ 2000a; 8: 413-418 ။
Griffiths က MD ။ အင်တာနက်နှင့်ကွန်ပျူတာ“ စွဲလမ်းမှု” ရှိပါသလား။ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်အထောက်အထားအချို့။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2000b; 3: 211-218 ။
Griffiths က MD ။ တစ် ဦး biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏ "အစိတ်အပိုင်းများ" မော်ဒယ်။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ဂျာနယ်။ 2005a; 10: 191-197 ။
Griffiths က MD ။ Workaholism နေဆဲအသုံးဝင်သောဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2005b; 13: 97-100 ။
Griffiths က MD ။ ဥရောပ၌လောင်းကစားခြင်းပြ:နာ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ယူကေ - Nottingham Trent တက္ကသိုလ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂိမ်းသုတေသနဌာနနှင့် Apex ဆက်သွယ်ရေး၊ 2009a ။
Griffiths က MD ။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ ခုနှစ်တွင်: Cardwell M က, Clark က ML, Meldrum ကို C, Waddely A, အယ်ဒီတာများ။ A2 အဆင့်စိတ်ပညာ။ လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန် - Harper Collins; 2009b ။ စစ။ 436-471 ။
Griffiths MD, Meredith အေဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ ခေတ်ပြိုင်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2009; 39: 47-53 ။
Griffiths က M, Wardle H, Orford J, Sproston K, Erens B. လောင်းကစား၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေး။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဗြိတိသျှလောင်းကစားပျံ့နှံ့မှုစစ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်များ။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2007; 2010: 18-208 ။
Grusser SM, Thalemann R, Griffiths က MS ။ အလွန်အကျွံကွန်ပျူတာကစားခြင်း - စွဲလမ်းမှုနှင့်ကျူးကျော်ရန်အထောက်အထားရှိသလား။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2007; 10: 290-292 ။ [PubMed]
Gupta R ကို, Derevensky JL ။ လူငယ်များအကြားလောင်းကစားခြင်းအလေ့အကျင့်: Etiology, ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှု။ In Essau CA၊ အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စွဲ - ကူးစက်ရောဂါ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: Academic Press; 2008 ခုနှစ်စစ။ 207-229 ။
ခန်းမ W, Degenhardt L ကို, Patton G. အဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို။ In Essau CA၊ အယ်ဒီတာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စွဲ - ကူးစက်ရောဂါ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်: Academic Press; 2008 စစ။ 117-148 ။
Hanley တစ် ဦး က, Wilhelm က MS ။ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်း: မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ငွေကြေးသဘောထားများစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း။ စီးပွားရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1992; 13: 5-18 ။
Harford TC၊ Grant BF၊ ရီဟီ၊ Chen CM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်သူများအကြား DSM-IV အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုစံပုံစံများ - ၂၀၀၁ အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအိမ်ထောင်စုစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2001; 2005: 29-810 ။ [PubMed]
Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF ။ မသန်စွမ်းမှုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုများ၏ပျံ့နှံ့မှု၊ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 2007; 64: 830-842 ။ [PubMed]
Hausenblas HA, Down DS ။ လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်မှီခိုမှု - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အားကစားနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း၏စိတ်ပညာ။ 2002; 3: 89-123 ။
Hay P. အစားအစာမူမမှန်သည့်အပြုအမူများ၏ရောဂါ - သြစတြေးလျလူထုအခြေပြုစစ်တမ်းတစ်ခု။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 1998; 23: 371-382 ။ [PubMed]
ယေဘုယျအလေ့အကျင့်အတွက်အရက်မှီခိုမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများဟေးလ်တစ်၊ Rumpf HJ၊ Hapke U၊ Driessen M၊ John U. အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 1998; 22: 935-940 ။ [PubMed]
Hodgins DC, el-Guebaly N. နောက်ကြောင်းပြန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှု၏အလားအလာရှိသောရောဂါများသည်လောင်းကစားခြင်းတွင်ပြန်လည်သက်ရောက်နိုင်သည်။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004; 72: 72-80 ။ [PubMed]
Hodgson RJ, Budd R ကို, Griffiths ကအမ် compulsive အပြုအမူတွေ။ In: Helmchen H၊ Henn FA၊ Lauter H၊ Sartorious N၊ အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်ပြိုင်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ Vol ။ 3. လန်ဒန်, အင်္ဂလန်: Springer; 2001 စစ။ 240-250 ။
Hoek HW, Hoeken DV ။ အစာစားခြင်းရောဂါ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဖြစ်ပွားမှု၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2003; 34: 383-396 ။ [PubMed]
Holderness CC၊ Brooks-Gunn J၊ Warren အမတ်များ။ အစားအစာမူမမှန်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အတူတကွရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 1994; 16: 1-34 ။ [PubMed]
Horvath TA ။ လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လောင်းကစားနှင့်ချောကလက် - စွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်အတွက်စာအုပ်စာအုပ်။ San Luis Obispo, CA: Impact Publishers; 1999 ။
Horvath TA ။ အစားထိုးစွဲ (သမ္မတ၏စာ) Smart Recovery News & Views ။ 2006; 12: 1-12 ။
Hughes JR, Helzer je, Lindberg SA ။ DSM / ICD- သတ်မှတ်ထားသောနီကိုတင်းမှီခို၏ပျံ့နှံ့မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2006; 85: 91-102 ။ [PubMed]
အစားအစာနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရာတွင် ဦး နှောက်နှင့်ဟော်မုန်းများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို in vivo in James AG, Guo W, Liu Y. ဆီးချိုရောဂါနည်းပညာ & ကုထုံး။ 2001; 3: 617-622 ။ [PubMed]
Johansson A, Grant JE, Kim SW, Odlaug BL, Gotestam KG ။ ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားခြင်းအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2009; 25: 67-92 ။ [PubMed]
Johnston LD၊ O'Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားစစ်တမ်းရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ၁၉၅၅-၂၀၀၈ ။ အတွဲ ၁ - အလယ်တန်းကျောင်းသားများ (NIH ထုတ်ဝေမှုနံပါတ် ၉-၇၄၀၂၊ စာမျက်နှာ ၇၂၁) Bethesda, MD: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု၊ 1975a ။
Johnston LD၊ O'Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားစစ်တမ်းရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ၁၉၅၅-၂၀၀၈ ။ အတွဲ ၂ - အသက် ၁၉-၅၀ အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများ (NIH ထုတ်ဝေမှုနံပါတ် 1975-2008, p ။ 19) Bethesda, MD: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု; 50b ။
Kafka အမတ်, Prentky R. အမျိုးသားများအတွက် nonparaphillic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့် paraphillias ၏တစ် ဦး ကနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1992; 53: 345-350 ။ [PubMed]
Kaltiala-Heino R၊ Lintonen T, Rimpela A. အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု။ 12-18 နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်လူ ဦး ရေအတွက်အင်တာနက်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemနာ။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ။ 2004; 12: 89-96 ။
Kaminer Y, Burleson JA, Jadamec A. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတွင်လောင်းကစားခြင်း။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု။ 2002; 23: 191-198 ။ [PubMed]
Kandel: D, Chen K, Warner LA, Kessler RC, Grant B. အမေရိကန်လူ ဦး ရေတွင်အရက်၊ နီကိုတင်း၊ ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းတို့အပေါ်မှီခိုနေသည့်လက္ခဏာများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားဆက်စပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 1997; 44: 11-29 ။ [PubMed]
Kaplan က MS, Krueger RB ။ hypersexuality ၏ရောဂါ, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2010; 47: 181-198 ။ [PubMed]
Kaufman E. အရက်နှင့်အရက်သေစာအလွဲသုံးမှုနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1982; 9: 1-17 ။ [PubMed]
Kausch O. ကုသမှု - ရှာဖွေနေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုပုံစံများ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2003; 25: 263-270 ။ [PubMed]
Kellett S, စုစုပေါင်းအိပ်ချ် joyriding စွဲ? သူတို့ရဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူလူငယ်များ၏မှတ်တမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ စိတ်ပညာ, ရာဇဝတ်မှု & ဥပဒေ။ 2006; 12: 39-59 ။
Kilpatrick DG, Acierno R, Saunders B, Resnick HS, အကောင်းဆုံး CL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ - အမျိုးသားနမူနာတစ်ခုမှအချက်အလက်များ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2000; 68: 19-30 ။ [PubMed]
Kim K, Ryu E, Chon MY, Yeun EJ, Choi SY, Seo JS, Nam BW ။ ကိုရီးယားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ကျခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနှင့်ဆက်စပ်မှု - မေးခွန်းလွှာစစ်တမ်းတစ်ခု။ သူနာပြုလေ့လာရေးနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2006; 43: 185-192 ။ [PubMed]
ကိုရမ် LM, Faber RJ, Aboujaoude အီး, အကြီးစား MD, Serpe RT ကို။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်းအပြုအမူ၏ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းခြေ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2006; 163: 1806-1812 ။ [PubMed]
Krueger RB, Kaplan က MS ။ paraphilic နှင့် hypersexual မမှန်မှုများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စိတ်ရောဂါအလေ့အကျင့်၏ဂျာနယ်။ 2001; 7: 391-403 ။ [PubMed]
Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ကောလိပ်ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အားလျော့ခြင်း။ အစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်များ။ ဆက်သွယ်ရေး၏ဂျာနယ်။ 2001; 51: 366-382 ။
Kuzma JM, အနက်ရောင် DW ။ ကူးစက်ရောဂါ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာသဘာဝသမိုင်း။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါကုဆေးခန်း။ 2008; 31: 601-611 ။ [PubMed]
Lacey EP ။ pica ၏ရှုထောင့်ကိုတိုးချဲ့: စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ။ 1990; 105: 29-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lacey JH, အီဗန် CDH ။ အဆိုပါ Impulsivist: တစ် ဦး က Multi- ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ။ စွဲ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1986; 81: 641-649 ။ [PubMed]
Ladouceur R, Boudreault N, Jacques C, Vitaro F. Pathological လောင်းကစားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားဆက်စပ်သောပြproblemsနာများ။ ကလေး & ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဂျာနယ်။ 1999a; 8: 55-68 ။
Ladouceur R, Jacques C, Ferland F, Giroux I. ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှု - ၇ နှစ်အကြာတွင်ပုံတူပွားခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 7b; 1999: 44-802 ။ [PubMed]
လာကင် M၊ Wood RTA, Griffiths MD ။ ဆက်ဆံရေးအဖြစ်စွဲဆီသို့။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2006; 14: 207-215 ။
Lejoyeux M, Avril M, Richoux C, Embouazza H၊ Nivoli F. F. Parisian fitness room ၏ဖောက်သည်များအကြားလေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့ခြင်း။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 49: 353-358 ။ [PubMed]
Leshner AI ။ စွဲသည် ဦး နှောက်ရောဂါဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ သိပ္ပံ 1997; 278: 45-46 ။ [PubMed]
Lesieur HR, Blume SB ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, အစာစားခြင်းရောဂါများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်။ စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဂျာနယ်။ 1993; 12: 89-102 ။ [PubMed]
Lesieur HR, Blume SB, Zoppa RM ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်လောင်းကစားခြင်း။ အရက်: လက်တွေ့ & စမ်းသပ်သုတေသန။ 1986; 10: 33-38 ။ [PubMed]
Lesieur HR၊ Cross J၊ Frank M, Welch M, White CM, Rubenstein G, Mark M. Gambling နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 1991; 16: 517-527 ။ [PubMed]
Lesieur HR, Rosenthal RJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ် (DSM-IV DSM-IV ကော်မတီအပေါ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၏ Task Force အတွက်ပြင်ဆင်) စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ 1991; 7: 5-39 ။ [PubMed]
Leung L. Net မျိုးဆက်သည်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းစေခြင်းတို့ကြောင့်အင်တာနက်၏ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 7: 333-348 ။ [PubMed]
Lewinsohn PM, Seeley JR, Moerk KC, Striegel-Moore RH ။ ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်အစာစားခြင်းရောဂါလက္ခဏာများတွင်ကျား၊ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2002; 32: 426-440 ။ [PubMed]
Machlowitz အမ် Workaholics: သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း, သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်။ Reading, MA: Addison-Wesley; 1980 ။
Marks I. အပြုအမူ (ဓာတုမဟုတ်သော) စွဲ။ စွဲ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 1990; 85: 1389-1394 ။ [PubMed]
Miller က NS, Gold က MS, Klahr AL ။ ကိုကင်းမှီခို (စွဲ) နိုင်ငံတကာစွဲလမ်း၏အရက်နှင့်ဆေးခြောက်မှီခို (စွဲ) ၏ရောဂါ။ 1990; 25: 735-744 ။ [PubMed]
Miller က WR, Walters က ST, Bennett က ME ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အရက်စွဲခြင်းသည်မည်မျှထိရောက်သနည်း။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2001; 62: 211-220 ။ [PubMed]
Mitchell JE, Redlin J, Wonderlich S, Crosby R, Faber R, Miltenberger R, Lancaster K. မလိုက်နာသော ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်ခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှု။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2002; 32: 107-111 ။ [PubMed]
Morahan-Martin J၊ Schumacher P. Incidence နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုများ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ။ 2000; 16: 13-29 ။
Murphy က SA, Hoffman က AL ။ အရက်မှီခိုမှုအတွက်ကုသမှုကိုအောက်ပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏အဆင့်တစ်ခုပင်ကိုယ်မူလဖော်ပြချက်။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှု၏ဂျာနယ်။ 1993; 5: 131-143 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် CB, Wittchen HU ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များ၏ယေဘုယျလူ ဦး ရေနမူနာတွင် DSM-IV အရက်မမှန်ခြင်း။ စွဲ။ 1998; 93: 1065-1077 ။ [PubMed]
Netemeyer RG, Burton S, Cole LK, Williamson DA, Zucker N, Bertman L, Diefenbach G. အဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများနှင့်ယုံကြည်ချက်များ - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုတစ်ခု။ ပြည်သူ့မူဝါဒ & စျေးကွက်၏ဂျာနယ်။ 1998; 17: 147-160 ။
Neuner M, Raab, G, Reisch LA က။ ရင့်ကျက်သောစားသုံးသူလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၌အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူခြင်း - ပင်ကိုယ်မူလပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း။ စီးပွားရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2005; 26: 509-522 ။
Niemz K, Griffiths M, Banyard P. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးမေးခွန်းလွှာ (GHQ)၊ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2005; 8: 562-570 ။ [PubMed]
O'Brien က CP, McLellan AT ။ စွဲလမ်း၏ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်။ ဒဏ္Myာရီ။ Lancet ။ 1996; 347: 237-240 ။ [PubMed]
Orford ဂျေအလွန်အကျွံအစာစားချင်စိတ်: အဆိုပါစွဲ၏တစ် ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်။ 2nd ed ။ Chichester, UK: John Wiley; ၂၀၀၁ ။
Palmer က RHC, လူငယ် SE, Hopfer CJ, Corley RP, တင်းကုပ် MC, Crowley TJ, Hewitt JK ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါ - ယေဘူယျစွန့်စားမှုအထောက်အထား။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2009; 102: 78-87 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပန်းခြံ SK, Kim JY, Cho CB ။ တောင်ကိုရီးယားဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်မိသားစုအကြောင်းအချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုများပျံ့နှံ့နေသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် 2008; 43: 895-909 ။ [PubMed]
Petry မိုင် ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: Etiology, comorbidity နှင့်ကုသမှု။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း၊ ၂၀၀၅
Petry မိုင် လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ - လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွှန်များ။ စွဲအပေါ်အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007; 16: 1-9 ။ [PubMed]
Philippe က F, Vallerand RJ ။ ကနေဒါ၊ မွန်ထရီရယ်တွင်လောင်းကစားပြproblemsနာများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏အခန်းကဏ္။ ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2007; 23: 275-283 ။ [PubMed]
Pirkola SP, Poikolainen K, Lonnqvist JK ။ ဖင်လန်ကျန်းမာရေး 2000 လေ့လာမှုမှရလဒ်အနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေအတွက်အရက်သောက်ခြင်းအားတက်ကြွစွာဖယ်ရှားပေးပါသည် အရက်နှင့်အရက်။ 2006; 41: 315-320 ။ [PubMed]
Poelen EAP, Scholte RHJ, Engels RCME, Boomsma DI, Willemsen G. ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အတွင်းနယ်သာလန်ရှိဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအကြားအရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာမှီခိုမှု။ 1993; 2000: 2005-79 ။ [PubMed]
Poorsattar SP, Hornung RL ။ Tanning စွဲ - လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အနာဂတ်ကုသမှု။ အရေပြားဗေဒအတွက်ကျွမ်းကျင်သူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2010; 5: 123-125 ။
Potenza MN, Steinberg MA, Wu R, Rounsaville BJ, O'Malley SS ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားသမားများ၏လက္ခဏာများသည်လောင်းကစား ၀ ယ်လိပ်စာခေါ်ခြင်း။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2006; 22: 241-254 ။ [PubMed]
ရေမွန် NC, Coleman အီး, Miner MH ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 44: 370-380 ။ [PubMed]
Regier DA၊ လယ်သမား ME၊ Rae DS၊ Locke BZ, Keith SJ, Judd LL, Goodwin FK ။ အရက်သေစာနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူစိတ်ရောဂါ၏ Comorbidity ။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းဂျာနယ်။ 1990; 264: 2511-2518 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲ၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization အမြင်။ စွဲ။ 2000; 95: 91-117 ။ [PubMed]
Schaef AW ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစွဲဖြစ်လာသည့်အခါ။ နယူးယောက်၊ နယူးယောက်။ Harper Collins; 1987 ။
Scherer K. College ၏အွန်လိုင်းဘဝ - ကျန်းမာရေးနှင့်မကျန်းမာသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဂျာနယ်။ 1997; 38: 655-665 ။
Schneider JP, သံ RR ။ စွဲလမ်းစေသောလိင်ဆိုင်ရာရောဂါများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု & အလွဲသုံးစားမှု။ 2001; 36: 1795-1820 ။ [PubMed]
ကွင်းစ်လန်အလယ်ပိုင်း၏မြို့ပြမဟုတ်သည့်ဒေသတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Schofield, G, Mummery K, Wang W, Dickson G. အကူးစက်ရောဂါလေ့လာမှု။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးသြစတြေးလျဂျာနယ်။ 2004; 12: 6-10 ။ [PubMed]
Seegers JA ။ ကောလိပ်ကျောင်းဝင်းတွင်လိင်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများပျံ့နှံ့နေသည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2003; 10: 247-258 ။
Shaffer HJ, ခန်းမ MN ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ကနေဒါတွင်မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသောလောင်းကစားခြင်းအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 2001; 92: 168-172 ။ [PubMed]
Shaffer HJ၊ Hall MN, Vander Bilt J. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုခန့်မှန်းခြင်း - သုတေသနပေါင်းစပ်ခြင်း။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999; 89: 1369-1376 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shapira NA, Lessig MC, Goldsmith TD, Szabo ST, Lazoritz M, Gold MS, Stein DJ ။ အင်တာနက်ပြနာများ - အဆိုပြုထားသောခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ 2003; 17: 207-216 ။ [PubMed]
Shaw M, အနက်ရောင် DW ။ အင်တာနက်စွဲ: အဓိပ္ပါယ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ရောဂါဗေဒနှင့်လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008; 22: 353-365 ။ [PubMed]
Smith DE, Marcus MD၊ Lewis စီ၊ Fitzgibbon M၊ Schreiner P. ၏ပျံ့နှံ့မှုအစာစားခြင်းရောဂါ၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာသည်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများ၏ biracial အုပ်စုတွင်။ အပြုအမူဆေးပညာရာဇဝင်။ 1998; 20: 227-232 ။ [PubMed]
Sommers ၁။ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အုပ်စု၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုခန့်မှန်းခြင်း။ အဆိုပါစွဲ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1988; 23: 477-490 ။ [PubMed]
Spitzer RL, Devlin M, Walsh BT, Hasin D, Wing R, Marcus M, Nonas C. Binge အစာစားခြင်းရောဂါ - ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံနှုန်းများကို multisite ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ Eating Disorders ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 1992; 11: 191-203 ။
Spunt B, Dupont I, Lesieur H, Liberty HJ, Hunt D. ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု - စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု & အလွဲသုံးစားမှု။ 1998; 33: 2535-2560 ။ [PubMed]
Steinberg MA, Kosten TA, Rounsaville BJ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ စွဲအပေါ်အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1992; 1: 121-132 ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Stinson FS, Ruan WJ, Picering R, Grant B. ဆေးခြောက်များသည်ပျံ့နှံ့မှု၊ ဆက်နွယ်မှုများနှင့်ပူးတွဲရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကိုအသုံးပြုသည်။ စိတ်ပညာဆေးပညာ။ 2006; 36: 1447-1460 ။ [PubMed]
Stucki S, Rihs-Middel အမ် ၂၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၅ အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းပြန့်ပွားမှု - နောက်ဆုံးအခြေအနေ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2000; 2005: 2007-23 ။ [PubMed]
Sussman S. Love စွဲလမ်းမှု - အဓိပ္ပါယ်၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 2010; 17: 31-45 ။
Sussman S, Ames SL ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု - အယူအဆများ၊ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ရပ်နားခြင်း။ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်။ ၂၀၀၈
Sussman S, အနက်ရောင် DS ။ အစားထိုးစွဲ: သုတေသီများနှင့်ယောဂီများအတွက်တစ် ဦး ကစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ မူးယစ်ဆေးပညာရေးဂျာနယ်။ 2008; 38: 167-180 ။ [PubMed]
Sussman S, Unger JB ။ တစ် ဦး က "မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု" သီအိုရီပေါင်းစည်းမှု: တစ် ဦး က transdisciplinary ထင်ကြေး။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု & အလွဲသုံးစားမှု။ 2004; 39: 2055-2069 ။ [PubMed]
တေလာ CZ ဘာသာရေးစွဲ: ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်အတူစွဲလမ်း။ သင်းအုပ်ဆရာစိတ်ပညာ။ 2002; 50: 291-315 ။
Teesson M, Baillie A, Lynskey M, Manor B, Degenhardt L. ယူအက်စ်နှင့်သြစတြေးလျတွင်ပစ္စည်း၊ အသုံးပြုမှု၊ မှီခိုမှုနှင့်ကုသမှု - နိုင်ငံပေါင်းစုံနှိုင်းယှဉ်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2006; 81: 149-155 ။ [PubMed]
Terry A, Szabo A, Griffiths အမ်။ လေ့ကျင့်ခန်းစွဲစာရင်း - အကျဉ်းချုပ်စိစစ်ရေးကိရိယာအသစ်။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ။ 2004; 12: 489-499 ။
Thaxton L. လေ့ကျင့်ခန်းသမားများအပေါ်ရေတိုလေ့ကျင့်ခန်းစွဲ၏ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု။ အားကစား & လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1982; 4: 73-80 ။
Timmerman MG၊ Wells LA၊ Chen S. Bulimia nervosa နှင့်အလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားဆက်စပ်အရက်သောက်ခြင်း။ အမေရိကန်ကလေးသူငယ် & ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါကုသမှုအကယ်ဒမီ၏ဂျာနယ်။ 1990; 29: 118-122 ။ [PubMed]
Toneatto T, Brennan J. ဆေးကုသမှုခံယူသောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားပြုသူများအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ။ 2002; 27: 465-469 ။ [PubMed]
Ulrich J, Hill A, Rumpf HJ, Hapke U, Meyer C. အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလူနာများနှင့်လူ ဦး ရေအကြားမှီခိုမှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2003; 69: 189-195 ။ [PubMed]
Volberg RA ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လူ ဦး ရေစာရင်းများ - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1994; 84: 237-241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volberg RA, Steadman HJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်သန့်စင်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1988; 145: 502-505 ။ [PubMed]
Volberg RA, Gupta R, Griffiths MD, Olason D, Delfabbro PH ။ လူငယ်လောင်းကစားပျံ့နှံ့နေတဲ့လေ့လာမှုများအပေါ်နိုင်ငံတကာရှုထောင့်။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2010; 22: 3-38 ။ [PubMed]
Wardman D, el-Guebaly N, Hodgins D. မြောက်အမေရိကဘော်ရီဂျင်နီလူ ဦး ရေအတွက်ပြProbleနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း: ပင်ကိုယ်မူလစာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2001; 17: 81-100 ။ [PubMed]
Warner LA၊ Kessler RC၊ Hughes M၊ Anthony JC, Nelson CB ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မှီခိုမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းတိုက်။ 1995; 52: 219-229 ။ [PubMed]
Welte JW၊ Barnes GM၊ Tidwell M-CO, Hoffman JH ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအကြားလောင်းကစားခြင်းပြproblemနာ - အမျိုးသားစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2008; 24: 119-133 ။ [PubMed]
အမေရိကန်လူကြီးများအကြား Welte JW၊ Barnes GM၊ Wieczorek WF, Tidwell MC, Parker J. အရက်နှင့်လောင်းကစားရောဂါဗေဒ - ပျံ့နှံ့မှု၊ လူ ဦး ရေပုံစံများနှင့်သက်ဆိုင်မှု။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2001; 62: 706-712 ။ [PubMed]
Westphal JR၊ Rush ဂျာ၊ စတီဗင် L၊ ဂျွန်ဆင် LJ ။ ၆ တန်းမှ ၁၂ တန်းအထိ Louisiana ကျောင်းသားများ၏လောင်းကစားအပြုအမူ။ 6; 12: 2000-51 ။ [PubMed]
Whang LS, Lee S, Chang G. အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အပြုအမူနမူနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2003; 6: 143-150 ။ [PubMed]
ဆောင်းရာသီ KC, Stinchfield R ကို, Fulkerson ဂျေပုံစံများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစား၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 1993; 9: 371-386 ။
Wong IL, ဒါ EM ။ ဟောင်ကောင်ပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003; 160: 1353-1354 ။ [PubMed]
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု၏လူငယ် K. စိတ်ပညာ: XL ။ အင်တာနက်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ။ 1996; 79: 899-902 ။ [PubMed]
လူငယ် KS ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ In: Vandecreek L၊ Jackson T၊ အယ်ဒီတာများ။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု: တစ် ဦး ကအရင်းအမြစ်စာအုပ်။ Sarasota, FL: Professional အရင်းအမြစ်စာနယ်ဇင်း၊ 1999 စစ။ 17-31 ။
လူငယ် SE, Corley RP၊ Stallings MC, Rhee SH, Crowley TJ, Hewitt JK မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု။ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုများ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2002; 68: 309-322 ။ [PubMed]